လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း | လွတ်လပ်မှု၊ ချစ်ကြည်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် လူသားဆန်မှု အနုပညာ
in: ကဗျာ, ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ
နေ့အစွဲ ___________________________ အဝေးကြီးက အသံတွေ လာနေတယ် အလင်းရောင်စူးစူးတွေ မကြည့်နိုင်ဘူး ဖုန်းကို အသံတိုးထားရ သင့်ဆီမှာ ဒီနေ့ ဘာနေ့လဲ ပြတင်းဝနား မနက်ခင်းရဲ့ခြေသံ ကြားလိုက်မိသလို ။ ကိုသက်အောင် ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၉ ...
၁၉၉၉ ခင်ဗျား ဘာလို့ ညနက်မှ အိမ်ပြန်သလဲ မေးခွန်း မှာ အဖြေ မရှိဘူး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အဖြေက ညနက်မှ အိမ်ပြန်ရတာ ကြိုက်လို့ ပဲဖြစ်နိုင်တယ် မြို့သေးသေးလေးဟာ ကျယ်ပြန့်လာပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် မြို့ရဲ့ ဧရိယာဟာ အရင်လိုပဲ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းကေ...
အကြောင်း တိုက်ဆိုင်တိုင်း တောင်တန်းတွေထဲ လေပြေလေးဟာ လေချွန်ပြီး ပြေးဝင်သွားတယ်. . . အကြောင်း မတိုက်ဆိုင်တိုင်း ခြေကားယား လက်ကားယား ငြင်းဆန်တတ်တဲ့ အမူအရာတွေနဲ့ဒီဒဏ်ကို လှိမ့်ခံနေရတာပါတဲ့ ကြာပြီ. . အဲဒီ ကြာပြီဆိုတာကလည်း ပြန်တွေးရင် အသစ် တဆစ်ဆစ ...
က​လေး​​တွေက ဂိမ်း လူကြီး​တွေက ဘိန်း တစ်​ ​နေရာယူက​နေ အစချီ ငါးဆိုတာနဲ့ ဒိုင်းကနဲပစ်​ချ စစ်​တိုက်​တမ်းကစားနည်းနဲ့ ငယ်​ဘဝ​​ပျော်​ရွှင်​ခြင်းမှာ က​လေးဂိမ်းဟာ လက်​နက်​ကိုင်​အနိုင်​ကျင့်​ခြင်း မပါ ​ချောင်​ပိတ်​ရိုက်​ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်​စက်​ခြင်​ ...
ငါ့အစား မင်းသာ အသက်ရှင်လိုက်ပါတော့ ပြောရမယ်ဆို ငါက အလကားကောင်။ ငါ့ သွေးတွေ ဖောက်ထုတ်ပေးမယ် ငါ့ ကျောက်ကပ်တွေ ဖြုတ်ပေးမယ် ငါ့ အသဲကို ဖဲ့ပေးမယ် မင်းသာ တကယ် အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ ဘာပဲ လုပ်ရ လုပ်ရ လုပ်ပေးချင်တယ်။ ငါက ဘာအသုံးမှ မကျဘူး မီးသေကာနီ ...
အဖြစ်အပျက်ကို တောင်းပန်လို့မရဘူး ဘယ်ဖြစ်ချင့်ပါ့ မလဲ ဖြစ်ခဲ့တယ် မှီခို ရခြင်း မမှီခို လို့ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ် လုံခြုံပါပြီတဲ့ မချိတင်ကဲ ပြုံးလိုက်တယ် ဘုရားသခင်ဟာ ဖွားဘက်တော်တွေနဲ့ ငမိုက်သားဟာ သူတော်စင် ရဲ့ ဖီလာ ချစ်တယ် ကိုယ်တိုင် ပုန်းလို့ ရမယ့် ပစ္စု ...
in: ကာတွန်း, ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ
သစ်ခွမိတ္တူ များ ဆုံစည်းခွင့်ဟာ ဟိုးအမြင့်ကြီးမှာ တောင်စွယ် တောင်စွန်းက နှင်းနုနေခြည်ထဲ တို့ အချစ်ဟာ လေဖိအားနည်းလေတယ်။ ဒေသိယစကားသံဝဲဝဲ နှုတ်ဆတ်အပြုံးမှာ အိမ်ပြန်ချိန်ဟာ အဖျားငွေ့ငွေ့ခြေလှမ်းများအတိုင်း မျက်နှာလွဲ ပြတ်သားခဲ့ရ။ ခေါင်းလောင်းကို ပြိ ...
မဆုံသောလမ်း တွေ့ဆုံဖို့ လာခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါ။ မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာ။ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း ဝမ်းနည်းခြင်း ချီးမွှမ်းခြင်း ကဲ့ရဲ့ခြင်း စိတ်မှန်ပြင်ပေါ်မှာ မြင်ရတာ။ မကြာခဏ ဆုံတွေ့မိသော်လည်း မဆုံးသေးတဲ့ လမ်းမှာ မဆုံသောလမ်းကို ...
မိသားစု(၂) တစ်ယောက်က ဘယ်ဆို တစ်ယောက်က ညာ။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ဝေမျှ သုံးစွဲလို့။ တစ်ဦးမေတ္တာဟာ တစ်ဦးမှာ စမ်းသီတာပဲ။ တစ်ထမ်း တစ်ရွက်နဲ့ လောကဓံရှစ်ပါးပေါ် ညီညီလျှောက်။ သူ့အပူ ကိုယ့်အပူထား ကိုယ့်အေးချမ်းမှု သူ့အေးချမ်း မှုဖက်ထား အဲဒီတံတားလေးအတိုင်း လျှောက်သ ...
မိသားစု(၁) တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ဖတ် အပြုံးဟာ ဖွင့်ဆိုစရာ မလိုတဲ့ ခက်ဆစ် အမေ့ရဲ့ ဥယျာဉ်မှာ ပန်းတွေ ဝေနေတတ်သလို အဖေ့ရဲ့ လက်ထဲ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားကို တွေ့တယ်။ သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ) 2.1.2016(4:26pm) ...
အမှား​တွေနဲ့​လောက ​​ခေတ်​ကြီးကိုက အ​ရောင်ဝင်း​နေမှ အရာသွင်းချင်​​တာ လူ​တွေဟာ အမှန်​တရားကို ဖင်​ခုထိုင်ပြီး အမှန်​တရားကိုပဲ လိုက်​ရှာ​နေကြ အမှားကြီးက လူတကာနဲ့ လက်​ဆွဲနှုတ်​ဆက်​​ရင်း ​နေရာတကာမှာ အရာဝင်​လို့ ​လောကကြီးက အ​စောင့်​မထား​မှ​တော့ အမှား ...
ဒီ အိပ်​မက်​​တွေထဲ ... ​မျှော်​လင့်​ခြင်း​တွေ ​ ကွယ်​လွန်​သွားတာထက်​ ပိုဆိုးတဲ့ ​သေခြင်းတရား မနက်​ဖြန်​ကို ရင်​မဆိုင်​ချင်​​တာထက်​ ပိုခက်​တဲ့ ​သေခြင်းတရား ရှိလား ​သေချင်​​ယောင်​​ဆောင်​ထားတဲ့ ​သေခြင်းတရားအတု​တွေကြား ​ပျောက်​ဆုံးကုန်​တဲ့ အပိုင ...
မြစ်ဟာအားလုံးဆီကိုရွေ့လျားသွားကြပြီ မင့်အပြုံးတွေဟာကပ်ပါးပိုးတွေလိုပဲ ခဏတဖြုတ်အသက်ရှုဖို့တောင်မေ့လျော့နေတယ် အဆိပ်ခွက်ထဲကိုခရမ်းချဉ်သီးဆော့နဲ့ပေါင်မုန့်မီးကင်တစ်ချပ် ကမ္ဘာကြီးဟာမင်းမရှိရင်ကြယ်တွေခုန်နေလိမ့်မယ် စကြာဝဠာကြီးထဲမှာဖြောင့်တန်းတဲ့ချစ်သူလမ ...
ကုတင်ပေါ်မှောက်လိုက်တယ် ထုံဆေးထိုးတယ် ဆရာဝန်က ဓားတွေ တောင်းတယ် သေးငယ်ပြီး သွေး အရမ်းဆာလောင်နေတဲ့ ဓားကလေးတွေ နောက်ကျောပေါ် တစ်ချောင်းပြီး တစ်ချောင်း စိုက်ဝင်နေတယ် အရေပြားကို လှန်တယ် အသားမှာ ကပ်နေတဲ့ အဆီကျိတ်ကို ကတ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်တယ် မလိုအပ်တဲ့ အစိပ်အပ ...
ပါ​တော်​မူ တို့ ဘုရင်​နဲ့ မိဘုရား ပါ​တော်​မူ ပါ​တော်​မူ တို့ နိုင်​ငံနဲ့ သယံဇာတ​တွေ ပါ​တော်​မူ ပါ​တော်​မူ ​ပေးကမ်းခြင်းသည်​ ​အောင်​မြင်​ရာ ​ပေးလိုက်​ကြ ​ရွှေ​တွေ ​ကျောက်​စိမ်း​တွေ ​ကြေးနီ​တွေ နစ်​ကယ်​​တွေ ကျွန်းသစ်​​တွေ ဓာတ်​​ငွေ့​တွေ ​တောင်​ ...
အို ချစ်သော.... ဂျူနို ဘဝဆိုတာ....လက်ဆောင်သေတ္တာကြီးတစ်ခုလို့ တွေးထင်လိုက် ။ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကံကောင်းမှုတွေလည်း ခုန်ပေါက်ထွက်လာမယ် ။ တခါတရံအစုတ်အပြတ်တွေကို ပါကင်လှလှလေးနဲ့ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ရယ်မောစရာတွေလည်း တွေ့ရမယ် ။ တရံတခါ ဈေးနှု ...
တို့တိုင်းထွက်​လာတဲ့စိတ်​အယား​တွေ​လေ။ အ​ဝေး​ရောက်​​စေလွှတ်​ချက်​​တွေနဲ့​ငွေ​ရောင်​သဲ​သောင်​မှာ လူတလုံးသူတလုံးစိမ်းဖန့်​ဖန့်လိပ်​ဥ​လေး​တွေမပုတ်​မသိုး။ ပင်​လယ်​​ရေပါကွယ်​ဘယ်​သူ​သောက်​​သောက်​ မကုန်​နိုင်​ပါဘူး။ ပင်​လယ်​​ရေပါကွယ်​​သောက်​​လေ ငတ်​မေ ...
ဘာ …… စစ် …ဟုတ်လား အသံတောင် မကြားချင်လို့ ဘုံဘိုင်ထဲကရေတောင် စစ်မသောက်ဘူး ဘိုးတွေဘွားတွေပြောတဲ့စကား ကြားဖူးနားဝနဲ့တင် မျက်ရည်ဝဲရတယ် စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်များ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျလိုက်ရှာမလဲ သားပျောက်လို့ အမေမတွေ့ အဘွားဆုံးလို့ေ...
in: စာအုပ်အတွေးအရေး, ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ
တာရာ​ဒေဝီသို့ ​ပေးစာ​နေရီရီစာအုပ်​တိုက်​၊ပထမအကြိမ်​၊ ဒီဇင်​ဘာ ၂၀၁၈။မျက်​နှာဖုံးဒီဇိုင်း - NN ။၁၃.၃ စင်​တီမီတာ x ၂၀.၇ စင်​တီမီတာ။စာမျက်​နှာ - ၁၂၀ ၊ တန်​ဖိုး - ကျပ်​ ၂၅၀၀။ အတွင်းစာမျက်​နှာ၌ ''တာရာ​ဒေဝီသို့ ​ပေးစာများ'' ဟု အမည်​တပ်​ထားသည်​။ ၁ သြဂ ...
ဥတုသုံးပါးကို ဘုရားပန်း​လို့ ​အော်​ရောင်းပြီး သိန်းငါး​ထောင်​ အိပ်​မက်​တွေနဲ့ ​မြေပြို​နေတဲ့ငါး​ထောင်​တန်​ အိမ်​ခန်း​လေးထဲက စိတ်​ဓာတ်​​တွေ တက်​တက်​ ကြွကြွ အ​ရောင်​မ​ရွေးဘဲ ကောက်​ခဲ့တဲ့ ရိုးသားမှု​တွေဟာခြေ​ထောက်​​လေး​တွေ မနာ​တော့ဘူး ဒါ​ပေမဲ့. ...
တိုက်ပွဲမှာ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ ကျည်တစ်တောင့်နဲ့ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ် ပြန်ပစ်ချလိုက်သလိုမင်းဟာ နောက်ဆုံးအရက်ခွက်ကို မော့သောက်ပစ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့ တသက်လုံး ခံပစ်လာခဲ့ကြတာ။ခုတော့ အိုစနာကျလို့။ငါတို့ ကျည်ကုန်နေပြီ။ ရန်​သူပတ်လည်ဝိုင်းထားဆဲဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ငါတိ ...
အဲ့ဒီပန်းကလေးဟာမထူးဇာတ်ခင်းပြီး အိပ်နေတယ်ဘယ်မြေသြဇာအစပ်အဆက်နဲ့ ငါတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘယ်သေနတ်နဲ့မှပွင့်ချပ်တွေ အောင်သံလွှင့်ရပါ့။ ကောင်းလိုက်တဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာအလင်းရောင်မဲ့သေတ္တာထဲမှာတော့အဆုပ်လိုက် အခိုင်လိုက်ဖူးလို့…… ပွင့်လို့……လိမ်လိမ်ပြီး မော်နေတဲ့ ...
အိမ်ရှေ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင် ပိုးကျတော့ 'ငါလား' လို့ မကြာခဏ ထွက်ကြည့်ဖြစ်တယ် တစ်ပင်လုံး အရွက်တုံးတော့မယ် ငါ ထွေးထုတ်ပစ်နေတာ ငါ ချွတ်ပစ်နေတာ ကွမ်းသွေးလား အင်္ကျီလား ဘဝလား နိစ္စဓူဝဘောင်ချာမှာ မလိုချင်ဘဲရတဲ့ ငရဲနဲ့ လိုချင်တိုင်းမရတဲ့ ကုသိုလ်နဲ့ မီးက ...
ကဗျာဆရာအမည်ခံဖို့လွယ်တယ် ကဗျာဆရာဖြစ်ဖို့ခက်တယ် ယမုံ ကျောက်တုန်းရဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့အသံက ပိုကျယ်လောင်တယ် ခေတ်ကိုပခုံးပေါ်လူမသိအာင်ထမ်းထားတယ် ရှုမဝအောင်လှတဲ့ရှုခင်းတွေထဲ မမြင်ရတဲ့တရားကပိုလှတယ် ညသန်းခေါင်ရေတွင်းနက်နက်ထဲ သာတဲ့လက ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ပန်းတပွင ...
မြစ်ဆုံစာချုပ် မြစ်ဆုံပြဿနာ – K ငြိမ်းချမ်း
in: စာအုပ်အတွေးအရေး, ဒီလဖတ်စရာ, အတွေးအမြင်ကဏ္ဍ
(အခုတလောမှာ တရုတ်သံအမတ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြစ်ဆုံဟာ အသံဗလံတွေ ပြန်လည် ဆူညံလာပါတယ်။ စီမံကိန်းကို ဆက်ဆောက်မယ် မဆောက်ဘူး အပြီးတိုင်ရပ်မယ် မရပ်ဘူး ဆိုတာကတော့ လက်ရှိ NLD အစိုးရရဲ့သဘောထားအပေါ်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပက စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ စာရေး ...
နင့်မလဲ တနေ့တနေ့ ဒီဗွီဒီယိုပဲတနေ့တနေ့ ဒီသီချင်းပဲရွာထဲစကတ်အတိုဝတ်ဝတ်နေတာ ငါမကြိုက်ဘူးကျောင်းကတစ်ခါပြန်လာတိုင်း ဆံပင်ပုံစံတမျီုးပြီးတမျိုးပြောင်းလာတာလဲ ငါမကြိုက်ဘူးလက်သည်းတိုတို ထမီတိုတိုနဲ့ ပါးကွက်ကလေးတွေကို မလွမ်းဘူးလားရွာလယ်ဈေးဆိုင်က တယ်လီဖုန ...
ရှင်သန်သူတွေရဲ့ ငှက်ပျောရွက်လက်တံရှည် စိမ်းစို ကွဲအက် ဖားဖားဝေ နာကျင်သံတွေဟာ မသေသေးတဲ့ အမြစ်အားကိုးနဲ့ဖေးမ မြေမကျမီ………။ အနုပညာကို အနုပညာဓာတ်လုံးနဲ့ဖိုထိုးနေတဲ့အဂ္ဂိရတ်တွေ ပြဒါးသေ တစ်ပြည်ဝသတဲ့ သံသေတော့ တစ်ဆွေဝသတဲ့ ပြောပါရစေ ကဗျာစပ်နေတဲ့အလင်္ကာဓာတ်တေ ...
ရွာနေတဲ့မျက်ရည်နဲ့ပဲ ငါတို့ကိုယ်ပေါ်က သွေးတွေကိုဆေးဆေးချနေရ မျက်ရည်တွေသွေးတွေလူးနေတဲ့ ခန္ဓာမှာ အလံတော်ဟာ ပျော်ရွှင်ပါရဲ့လား။ သောက်ခလုတ်ကို ဆွဲဆွဲညှစ်နေတဲ့ လက်မှာ နတ်ဆိုးရဲ့အမိန့်ပေးသံအကြောအမျှင်တွေ လန့်လန့်ခုန်နေ ကျည်ဆံဟာ လာရာလမ်းဆီပြန်လှည့်ဖို့ ဆု ...
ကို​လေးမြတ်​ -အညာဓ​လေ့ ရွာဓ​လေ့- မိုးမင်းသိမ်း
Democracy Today သတင်းစာ တွင်​ ၂၄ ဇူလိုင်​၂၀၁၇ မှ ၂၂ ဇန်​နဝါရီ ၂၀၁၈ အထိ ​ဖော်​ပြခဲ့ သည့် အညာဓ​လေ့ ရွာဓလေ့ ​ဆောင်းပါး ၂၇ ပုဒ်​ကို စုစည်းထုတ်​​ဝေထားခြင်း ဖြစ်​သည်​။ နွားဒုန်းပြိုင်​ပွဲ၊ ဆွမ်းကြီး​လောင်းပွဲ၊ မုန့်​ဦးလှူပွဲ၊ ရွာ​ဆော်​၊ အခန်းစ ...
​ရောဂါပဲ ဘယ်​​တော့မှ အမျှင်​ပြတ်​တယ်​ မရှိ တခုခု ဝင်​​ဆောင့်​​နေတာ အစိုးရနဲ့ ပြည်​သူဆိုတာ ထာဝရရန်​သူ​ပေါ့ တ​စောင်း​စေးနဲ့ မျက်​​ချေး အလိုမပြည့်​မှု​တွေက ဒိုးယို​ပေါက်​ ငါတ်ို့ဟာ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ အမြဲပဲ ပျားတုပ်​ခံရ ဒုက္ခ​ရေစီး​ကြောင်းဟာ ဘယ်​​တော့ ...
ဥတုမြောက်လှချည့် တုတ်တုတ်မျှမငြိမ်ဖူးတဲ့ ကောက်ရိုးခြေထောက်မြက်ခြေထောက်တွေ ကျွဲတဖက် ဂွန်ဒေါင်ဖတဘက် ညနေအရိပ်ကြီးလက်တန်ရှည်က ဇိတော့ကုတ်ရဲ့နတ်ပြည်မရောက်ဘူး ရွာ။ မှောင်မှာဆိုလည်း နက်နက်သာမှောင်ချလိုက်စေချင်တာ ကျွဲပျောက်တဲ့အကြောင်း ရွာဦးနတ်တိုင်မလို့အ ...
သေနတ်ကလေးထမ်းတာ တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းတာပဲလား။ ဖိုးနီချွတ်ပုံခဲ့တဲ့ အဖြူအစိမ်းလေးဘေးမှာ သူ့အမေ မျက်ရည်လေးမခြောက်သေးဘူး။ ဖိုးနီဟာ ခု လူကြီးတယောက်ဖြစ်လို့။ ဖိုးနီဟာ ကစားရတာ ဝါသနာမထုံတတ်တော့ဘူး။ ဖိုးနီဟာ ကဗျာတွေ မရွတ်တတ်တော့ဘူး။ ဖိုးနီဟာ ပြုံးပြုံးရွှ ...
ပိရမစ်ကြီးတွေရှိနေဆဲပဲ ပိရမစ်ကြီးတွေကို ဆောက်ခဲ့တဲ့လူတွေ ရှိမနေတော့ဘူး ပိရမစ်ကြီးတွေဟာ လူသစ်တွေနဲ့အဆင်မှပြေပါရဲ့လား ရွေ့နေတဲ့ခေတ်တွေနဲ့ကော အေးဆေးပဲလား ကျောက်တုံးတွေနဲ့လုပ်ထားတော့ ခံစားချက် မာကျောအေးစက်နေမယ်ဆိုတာ သိပါတယ် အို ပိရမစ်များ သင့်ကိုယ်ထ ...
in: ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ
Poetry Wave Vol .6ပါဝင်​မှုများ Cover Story ​ မောင်​သင်းခိုင်​ စာ​ပေဘဝမှတ်​တမ်း- အောင်နှင်းသစ် မေးမြန်းထားတဲ့ မောင်သင်းခိုင်ရဲ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအချို့ ကဗျာ ​မောင်​ကြူးရင့်​၊ ရန်​နည်​၊ နိုင်​မွန်​​အောင်​သွင်၊​ ချစ်​ထွန်း၊ ခက်​သီ၊ ညီမိုး​အေး၊ ​မော ...
ဧရာဝတီကို အခါခါယုံမှတ်လို့ အခါခါပုံအပ်ခဲ့ရာက သူ့ဘဝသူ ပါးစပ်ဖျားလေးတင် မေ့နေတတ်တဲ့သူရယ်ပါ ။ ဒုက္ခဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတော့ အရေထူသွားလိုက်ပုံက ချိုသလား ခါးသလား မသိတော့ဘူး ပူသလား အေးသလား မသိတော့ဘူး ။ သူပြောနေကျစကားတစ်ခွန်းပဲ သူထပ်ထပ်ပြောခဲ့တယ် ဖြ ...
ညတိုင်းညတိုင်း အဲဒီဒုက္ခအိုးထဲငါဖွင့်ဖွင့်ကြည့်နေတာ ဒုက္ခကောင်တွေကတွားသွားလို့ခရီးပေါက်ခဲ့ ရက်ပေါင်းထောင်ချီ နေပြီပေါ့။ ကောင်းကင်ကကြယ်တွေတစင်းပြီးတစင်း ကြွေကျနေတာတောင် ကြယ်တွေက ယုတ်လျော့မသွားဘူး ခရီးအဆက်ဆက်ကကြယ်တွေဟာ ရဲရင့်တယ်။ ဟိုမှာမိုးတွေရွာနြေ ...
ခေတ်​တိုင်း​ခေတ်​တိုင်းမှာ ​မွေးဖွားခဲ့တာ​ပေါ့ဝါးလိုလို ထရံလိုလို ​ကောင်​စား​မျိုး​တွေအခုပဲ သူတို့ဟာ သူရဲ​ကောင်း​တွေငါတို့မြို့ကြီး ကျ​ဆုံးမသွားရ​လေ​အောင်​ သူတို့ပဲ ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သလိုလိုဘာလိုလိုညာလိုလို။ အ​ရေး​တော်​ပုံတုန်းကနွံထဲနစ်​​နေတဲ့ြ ...
ငပေါတယောက် အိမ်တံခါးခေါက်ပြီး စာသားတွေ လာပို့လိမ့်မယ် သုံးစားမရတဲ့ ဘယ်သူမှမယုံကြည်တဲ့ သတင်းစာစက္ကူတွေ ဟိုးတုန်းက လာပို့သလိုမျိုးပေါ့ သူတို့ဟာ မမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကို သင့်ထံပို့ကြပြီး မဟုတ်ပါဘူး အဲဒီမှာ ဘုရားသခင်မရှိပါဘူးဆိုတာမျိုး စကားနှစ်ခွနဲ့ ...
ဓား​တွေက အပြီးသတ်​မှာ တုံးသွားတတ်​​ပေမယ့်​ တရား​တွေက အပြီးသတ်​မှာ ဘယ်​​တော့မှ မတုံးကြ နာသူကိုယ်​တိုင်​ ဆက်​​သွေးကြ။ ပုံပြင်​​တွေက အပြီးသတ်​မှာ ဆုံးသွားတတ်​​ပေမယ့်​ ကဗျာ​တွေက အပြီးသတ်​မှာ ဘယ်​​တော့မှ မဆုံးကြ ဖတ်​သူကိုယ်​တိုင်​ ဆက်​​ရေးကြ။ ​ခေတ်​​ ...
ငါ မမွေးခင် (၁၁)နှစ်မှာ ငါ့နိုင်ငံတော် သူ့ကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်တယ် ငါမွေးပြီးလေးနှစ်မှာ ငါ့နိုင်ငံတော် စစ်ကျွန်ဘဝကို ကျရောက်တယ်။ (၇၁) နှစ်မြောက် လွပ်လပ်ရေးနေ့မှာ ၆၁) ကြိမ်မြောက် မလွတ်လပ်သေးတဲ့ ကြေညာစာတမ်းကို ငါပြောမယ်။ ဒီရေ မြေ လေထုအောက်မှာ တထောင် ...
ဂျိုဟန်ခရိုက်ကိုလွမ်းမိတယ် – မိုးကျော်အောင်
in: ဒီလဖတ်စရာ, အတွေးအမြင်ကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး
ဘောလုံးအကြောင်း စဉ်းစားမိတိုင်း ငယ်ငယ်တုံးက ဘောလုံးကို သဲသဲမဲမဲ ကစားခဲ့ပုံတွေ ပြေး လို့ အမှတ်ရမိပါတယ်။ ကလေးအရွယ် အဲဒီ ကာလများမှာ တကယ့်တကယ်ကို ဘောလုံးအပေါ် မှာ ငြိတွယ်ခုံမင်၊ ရူးမူးခဲ့တာကိုလည်း မမေ့နိုင်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘောလုံးအသစ်တစ်လုံးပိုင် ဆ ...
သူ့သမိုင်းနဲ့သူ သောင်ထွန်းတယ် ဘယ်သူ့စိတ်ကူးမှမလိုဘူး ကဗျာဟာ အဲ့လိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ မြစ်ရေအလျင်။ စက်မှုဇုံထဲကထွက်လာတဲ့ ပဋိသန္ဓေတားဆေးဘူးခွံမဟုတ်ဘူး မြစ်ကသူရဲ့လက္ခဏာ ဆန့်ထွက်နေသောကဗျာ။ ရှုမဆုံး မြင်ရ လွတ်လပ်နွေးထွေးသောကဗျာ ခေတ်အဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတ ...
ဒီပုံအတိုင်း ငါရွေ့လာတာမဟုတ်ခဲ့ဘူး သင်္ဘောတစ်စီးစာ ကောက်ကျစ်မှုနဲ့ ငါးပါးသီလ ဟန်ရေးပြခွဲတမ်းတွေကို ဘုရားရှင်တွေရှေ့မှောက်မှာ ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ် မာလိန်မှူးမပါတဲ့ ရွေ့လျားမှုဆိုတာ ကြယ်တွေလို အာကာသထဲ ကွန်းပတ်စ်ကျွမ်းကျင်မှရတာ တရွေ့ပြီးတော့ တရွေ့။ ငါ့မှာနာ ...
အဂုင်္လိမာလ သာ အဟိံသကတစ်​ပါးဖြစ်​ခဲ့ ဒီမှာ ဘုရားအဆူဆူပွင့်​​နေပါပ​ကော... ။ ရင်​ကြား​စေ့ဖို့ ​ဟောင်း​လောင်းပွင့်​​နေတဲ့ ရင်​ဘတ်​ ထပ်​ဖွင့်​​ပေးရမလား။ ငြိမ်းချမ်း​ရေး​တေး အတူတူသီ​ကြွေးမယ့်​ နှလုံးသား​တွေ နာဖျား​နေကြဆဲ။ အင်​ကြင်းပန်းခိုင်​ထဲက အာ ...
in: ကဗျာ, ရသကဏ္ဍ
အရူးကအရူးကို ဆေးကုနေတယ်။ နဖူးရှုံ့တာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲ။ မျက်မှောင်ကြုတ်တာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီလဲ။ တောက်ခေါက်ဖူးတာ ဘယ်နှစ်ခါလဲ။ အရူးကအရူးကို မေးတယ်။ အရင်အတိုင်းပဲတဲ့ အရူးကဖြေတယ်။ အရင်တိုင်းပဲဆို ကောင်းပါပြီဆိုတော့ အရူးဟာ ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီး အရူးကအ ...
ဆိုင်လား/မဆိုင်လား မသိတဲ့ ကဗျာ- လူမျိုးလွင်
သောင်စပ်က ကိုင်းနေတဲ့ကျူပင်ပေါ်လာနားတဲ့စာဖြူငှက်ကလေးကိုတွေ့တော့'နိုင်ဝင်းဆွေ' ရဲ့ 'နွေတည' ဝထ္တုထဲက'ခင်ဝေ' ကိုသတိရမိဆိုင်လား/မဆိုင်လားတော့ မသိ။ 'စပါး' က 'ဆွန်ဟောင်မင်'စစ်မှုထမ်းတာ ကင်းလွတ်ခွင့်ကြားတော့ခြေတဖက်မရှိတဲ့ စာအုပ်အဟောင်းရောင်းသူ'စစ်ပြန်'ကြ ...
မြန်မာကဗျာလောကမှာ ကဗျာရွတ်သံတွေ မြိုင်နေတယ် ။ ကဗျာဆရာတွေရဲ့ လွတ်လပ်သောအသံ အခါမလပ် ပျံ့လွင့်နေတယ် ။ ဒီယဉ်ကျေးမှုကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကဗျာချစ်သူတွေ ပြည်သူတွေ ခံစားနိုင်စွမ်း နားလည်/ နားယဉ်နိုင်စွမ်းရှိလာလိမ့်မယ် ။ တစတစနဲ့ ကဗျာ့အသံဟာ ပြည်သူ့အသံ အသွ ...
မြဝတီ – မဲဆောက်​သွား တောလား- သင်းရည်လွင်
ငယ်​ငယ်​တုန်းက သမိုင်းဘာသာ ရပ်​ထဲ သင်​ခဲ့ရ အယုဒ္ဓရ ခေါ်တဲ့ ဒေသ အခု ခင်​ဗျား ခြေချနေတဲ့အရာ ။ သူ့ကိုယ်​ပေါ်က ဘန်​ကောက်​မြို့တော်​က အလှပြင်​ပစ္စည်းတွေ ငွေကြေး သံတချွင်​ချွင်​တွေ ဝတ်​ကောင်းစားလှတွေ နဲ့ခင်​ဗျား မြင်​နေတဲ့ နောက်​ဆုံးပေါ် ဖက်​ရှင်​တွေ ...
လူ့ငရဲခန်း – ဉာဏ်ရှင်း
စာဖတ်ဖူးသူတိုင်းသိကြတယ်အဲဒီ့ခေတ်နဲ့စနစ်ကို အခုအချိန်နဲ့တွက်ကြပါစို့ငါတို့ဘာတွေမပြောင်းလဲလို့အဲ့ဒီ့ အဟောင်းငရဲထဲဆင်းနေကြသလဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲဖို့အဆင်မသင့်တဲ့ကြွေးကြာ်သံတွေနဲ့ ... ။ လိမ်လိုက်ပါ၊ လိမ်တာဟာ ညာတာမဖြစ်ဖို့လိုမယ်ဘဝမှာ လိမ် ...
အခြေခံဥပဒေ – အုပ်မိုး
ခင်ဗျားမျက်နှာမှာလဲသားဆက် ခြားနည်းနဲ့။ ဒီကိစ္စ..ဘုမေးလဲမသိဘမေးလဲမသိ။ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ပြီး ဆေးမင်ထိုးရတာလောက် နစ်မွန်းတာမရှိဘူး။ နောက်ဆုံးတော့လဲ ခါးတောင်ကျိုက်တခြား ပေါင်တခြားပါအမိ။ မကြောက်ပါနဲ့ ကိုယ့်ခြေသလုံး ကိုယ်ထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒူး ...
အင်္ဂတေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အိပ်မက်တွေ သေကြောင်းကြံစည်နေကြသလား ။ နေဝင်ချိန်က အိပ်ဇောပိုက်ထဲကထွက်လာပြီး တဖြည်းဖြည်းအက်ကွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ် အက်ကွဲကြောင်းတွေထဲက မျက်လုံးတွေ ဖန်ဂေါ်လီလုံးတွေလို ကျွတ်ထွက်လာခဲ့ကြ တယ် ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျောပြင်ပေါ်မှာ ဗင့်ဆင့်ဗန်ဂိုးရဲ့ ...
ရေမဆေး – ချစ်ချစ်( ဟုမ္မလင်း)
ကံကို ကံခြင်းထပ်လို့ မြေဇာပုံထဲမှာ တံတိုင်ကို ကျောက်ကထပ်ဖို့ မြေဇာပုံထဲမှာ မိုးရွာရင် အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့ မိုးရွာရင် တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် မြေဇာပုံပြိုလို့ အသက်ကို ကျောက်နဲ့ထုပ်လို့ အသက်ကို မြေဇာပုံပေါ်မှာ ထုပ်ထားလို့ အထုပ်ထမ်းလာတာကို မြင်ချင်တယ် အသက်ထမ ...
ငါ မေ့ချင်​တဲ့ အကြောင်း – သင်းရည်လွင်
လွန်​ခဲ့သော အချိန်​ဖြစ်​သည်​။ တခါက ဖြစ်​သည်​ နှစ်​များစွာကဖြစ်​သည်​ သူ့လမ်းသူမောင်းရင်း ငါ့ကိုဝင်​တိုက်​သွားတဲ့ ကား ငါ့ ခမျာ လူးလွန့်​အော်​ဟစ်​ နာကျင်​ ဘယ်​သူမှ မသိလိုက်​ဘူး ဘယ်​သူမှ မမြင်​လိုက်​ဘူး ချောကလက်​တစ်ခု ပစ်​ချ သူ မောင်းထွက်​သွားလိ ...
ချစ်ခြင်းဖြင့်သာ – ဝင်းသိန်းထွေး
အပင်ကနေ အခြွေခူးခံရတာအပြင် ရေလည်းအနှစ်ခံရသေး ပုလင်းထဲထည့်ပြီးလည်းအလုံပိတ်ခံရသေး စကားဝါပန်းကလေးဟာ။ ရေထဲကနေကုန်းပေါ်အတင်ခံရတာအပြင် အကြော်လည်းခံရသေး မကြော်ခင်ဓားနဲ့လည်းအမွှမ်းခံရသေး ငါးကလေးဟာ။ ကဗျာဆရာပါ စကားဝါပန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ငါးကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ် ...
ထီးလေးတစ်လက်ဝယ်ခဲ့ဘူး – လွန်ဆေး
မနေ့ကလို ဒီနေ့ လက်ထဲလေတောင်မမိဘူးရယ် ။ စိတ်လေတယ်ကွယ် တိမ်တွေကို စိတ်နဲ့ပစ်မှားနေမိပေါ့ ။ အရောင်တွေက ငါ့စိတ်ကို အလိုမတူဘဲပေါင်းသင်း ။ ရာသီစာပါးစပ်တွေ ဖောရောင် အတောင်ပေါက်တာ မြန်လွန်းပါ့ ။ ကမ္ဘာကြီးနာဖျားနေမှတော့ အမေအိုအတွက် ထီးလေးတစ်လက် လိုလိုမယ်မ ...
ဟို အကောင်- ဇော်ထိန်
ကြီးမှ အရာရောက်တယ်ထင်တဲ့ ဟို ငနဲဒိုင်ကြောင်တဲ့ သူ့ အရိုးတွေကို ကလေးတွေက မထိတထိ ဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီး ပြောတယ် ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ကောင် ဘယ်နားသုံးစားလို့ ရမလဲ ပြတိုက်က ထွက်လာခဲ့ပေမယ့် ခေါင်းထဲက မထွက်တော့ဘူး ကြီးပြီး အသုံးမကျတဲ့ ဟိုကောင့်အကြောင်း။ 25.9.201 ...
ဖုန်းဆိုးမြေမှာ လောက်ကောင်တွေမြူးတဲ့နိုင်ငံတော် မနက်ခင်း လမ်းပေါ်တက်လိုက်ရင်ဖြင့် ညကသွေးထားတဲ့ဓား ဘယ်နားထစ်လိုက်ရမလဲ အရိုးစွဲနေတဲ့နိုင်ငံတော် ကြက်မတွန်လို့ မိုးမလင်းပါဘူးပြောပြီး ထဘီအောက် ပြေးပြေးပုန်းတဲ့နိုင်ငံတော် အိမ်နီးချင်းဆွေမျိုးဆိုပြီးန...
မြူခိုးဝေဝေ သစ္စာသစ်တရား၊ အာဟာရမှုန့်နှင့် အာကင်ဆောရောက် မင်းထွဋ်ခေါင်သို့ လွမ်းချင်းကဗျာ- ခင်လွန်း
in: Poem, ကဗျာ, ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ
“ တောင်ခိုးတဲ့ဝေဝေ၊ မြူခြေတဲ့ဆိုင်းဆိုင်း ငါ့အဖေမော်ကာကြည့်တယ် ခေါင်းပေါင်းပြုတ်ကျ ” တဲ့။ ကျနော်တို့နေတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းလေးတခွင်မှာ ခုနေဆိုရင် နှင်းလားမြူလားမကွဲပြားအောင် ရှစ်ခွင်တိုင်းမှိုင်းမှိုင်းမှုန်ရီနေပါပြီ။ ဒီလိုအချိန်မျိုး မှာ ငယ်ငယ်တုန်းက ...
တောလမ်း​လေး – မောင်နောင်မွန်
သစ်​ပင်​ကိုသစ်​ပင်​လိုမြင်​​အောင်​ကြည့်​​ပေါ့ငါတို့မြင်​​နေရတဲ့ ​တောအုပ်​ကမာယာနဲ့မှိုင်းညို့ညို့။ စိတ်​လက်​ကြည်​သာဖို့ လမ်း​တွေဆက်​​လျှောက်​​နေရင်းကအဆုံးစွန်​မဲ့​သော မှတ်​တိုင်​​တွေဆီဖြတ်​​ကျော်​​တွေ့​နေရတဲ့ ဆုံမှတ်​များက​တော်​လှန်​လိုစိတ်​အပြ ...
ရင်မလင်းတော့ ညက ပိုပို မှောင်သောက ယောင် အခန်းဆက်နဲ့ညတာရှည် ရောဂါသည်တိတ်ဆိတ်ခြင်းမှာစိတ် သူယောင်မယ်က ခြောက်လှန့်အက်ကွဲရှ ညဥ့်ငှက်မြည်သံလရောင်အသေ အထီးကျန် ညအကာလရဲ့ သွေးသားခမ်းခြောက်မှုကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် တစ်ကိုယ်ရည် မပျော်လည်း ပျော်ပျော်လည်း ...
အရူးအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည် – စံညိမ်းဦး
ဘုရားသခင်အလစ်မှာစေတန်ဟာ ဒီဂျပုကိုမွေးဖွားခဲ့တာ။ နှုတ်ခမ်းမွှေးထားသင့်တယ်ယူဆတဲ့ဂျပုအတွက်စေတန်ကပဲ သူ့ခြေမနှစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးနှုတ်ခမ်းမွှေး လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ဂျပုတို့ရဲ့'' များများလိမ် နေ့တိုင်းလိမ် အမှန်ထင်လာကြလိမ့်မယ်'' နဲ့ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော သဒ်ရို ...
စပျစ်သီးတွေ မှည့်ပါပြီလား- နေစိမ့်
နာရီလက်တံတွေ ရွေ့နေပါစေ မြင်ရသလောက်သာ သူငယ်အိမ်က ဘာသာပြန်ရ။ ဘုရားသခင်က အမှန်တရားကို မျက်လှည့်ဆရာထံ ရှုံးကြွေးဆပ်လိုက်ပါတယ်။ တရားခံရဲ့ဆန္ဒအရ တရားသူကြီးက ရာဇဝတ်မှုကို စီရင်ချက် မချရသေးပါဘူး။ အတိကျဆုံးမျက်မြင်သက်သေက အလောင်းကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ နေစိမ့် ...
အနှေးကုန်း( Slowdown -ကုန်း)-အုပ်မိုး
လက်ကိုင်အပေါ်ခလုတ်မပါတဲ့ဟွန်းကိုခဏခဏ တီးဖို့ကြိုးစားမိတယ်။ ခြေတဖက်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့ညီလေးတယောက်ကယားယံမှုကြောင့် သူ့ခြေမျက်စိကိုကုပ်ခြစ်ဖို့အမြဲစမ်းဖူးတယ်တဲ့...။ အမှောင်မှာဆို..အဝါနက်အကြားကိုရေးဆွဲထားသင့်တယ်မဟုတ်လား။ 9.12.2018 ...
မြားတန်းလန်းမြစ် – ရာမည မင်းငြိမ်းချမ်း
in: ကဗျာ, ဒီလဖတ်စရာ
ဖေဖေရဲ့ ရှိုက်သံမှာကျွန်တော်ငိုနေတယ်ဆို ယုံမလား။ ကြွေးဟောင်းကိုမဆပ်နိုင်သေးဘဲကြွေးသစ်ပါ ဆက်တင်နေတဲ့ ကျွန်တော်ဖေဖေ့အရိပ် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကကမ္ဘာ့အနက်ဆုံး ချောက်ထဲခုန်ချခဲ့။ ကျွန်တော့်စိတ်နဲ့ဖေဖေ့နှလုံးခုန်ခဲ့တယ်ဆိုတာမေ့ခဲ့။ဖေဖေ ကရုဏာဒေါသနဲ့ ...
ခင်လွန်း ဘာမှမရှိတော့ဘူးမှမရှိတော့ဘူး-မင်းတို့မှာအာဏာရှိတယ်ငါတို့မှာ အိပ်စရာမရှိတော့ဘူးမင်းတို့မှာ နောက်လိုက်ဗိုလ်ပါတပ်ထုကြီးရှိတယ်ငါတို့မှာ ထင်းခွဲဖို့ဓားမတောင်မရှိတော့ဘူးငါတို့မှာ ထမင်းချက်စရာအိုးလဲမရှိတော့ဘူးမိုးရွာကြီးထဲင့ါကလေးငိုနေတယ်ချော့စ ...
.အဲဒီနေ့ကကျူရှင်ကမုန့်စားဖို့ပြန်လွှတ်တာသားက အိမ်ကို လွယ်အိတ်ပြန်ယူပြီးတော့ ကျူရှင်ကိုပြန်ထားတာ။ ကျူရှင်ကနေပြီးတော့ မုန့်သွားစားတာ။ ချယ်ရီဥယျာဉ်နားရောက်ရောသူကကားလမ်းမ ရှုပ်နေတယ်။ငါ လမ်းဆင်းလျှောက်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ အဲဒီမှာ သားကစက်ဘီးနဲ့ နင်းသွားတယ ...
.မုန်တိုင်းသတိပေးချက် ဝင်လာတယ်သတင်းထောက်တွေ အဖမ်းခံရတယ်ချေ မွေးနေ့ ဆိုလားဂျပန်က အသံက စစ်မဲ့ဇုံဆိုတော့မိုးမလင်းခင်နိုးတဲ့သူတွေ ဒီနေ့ များသားကြက်သားအုပ်မက ငါးနာရီမထိုးခင် အိပ်တန်းဆင်း အစာရှာငါလည်း ဘာထူးလည်း ဆုမင်းတို့ သားမိလွမ်းစိတ်နဲ့တညလုံး အိပ်မ ...
.ကိုယ့်ရာသီဥတုဟာ သူ့မျက်နှာပေါ် မူတည်နေလေရဲ့လက် လှုပ်လှုပ်လိုက်တိုင်းခြေ လှုပ်လှုပ်လိုက်တိုင်းပင်လယ်စောင့်ဘီလူးကြီး အမျက်ထဲကရွက်လှေကလေး ဖြစ်သွားရတယ်သူ့ရာသီဥတုကတော့ ကိုယ့် ခယမှုပေါ် မူတည်နေလေရဲ့ခေါင်းလေး ငုံ့ငုံ့ဒူးလေး ကျုံ့ကျုံ့သခင့်ခြေနဲ့ အချော့ခံချင် ...
.အရင်က အမှောင်ညများအတွက် တာဝန်ကျေ ထွန်းလင်းပေးခဲ့ပြီပဲ။ကျွမ်းနေတဲ့ မီးသီးတွေကို ကြည့်ပြီးအဖေလက်ထက်ကမို့အမေလက်ထက်ကမို့ မလဲဘူးအမှောင်ထဲနေမယ် ဆိုပြီး ခေါင်းမာ မနေပါနဲ့။ခေါင်မိုးက ယိုရင် ခေါင်ကို ပြင်ရမှာပဲကြမ်းခင်းက ဆွေးရင် ကြမ်းခင်း လဲရမှာပဲနံရံတေ ...
.ဘာအတွက်ရယ် ဘာကြောင့်ရယ်မသိရပဲအိပ်မက်တွေလှပနေတဲ့ မိသားစုအိမ်လေးထဲကမ္ဘာပျက်သံ ပွက်ပွက်ညံရာကမျက်နှာကို လာစင်တဲ့ သွေးစ သွေးနများ ….အိမ်ခေါင်မိုးဟာ ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားတယ်နေ့လယ်က အတူကစားခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့လက်တစ်ဖက်သွေးစက်လက်နဲ့ရင်ဘတ်ကို လာမှန်တယ် ၊ည ...
သူတို့ရေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး – ကာတွန်းKzzh
အဆုံးအစမဲ့ သစ်ရွက်တွေကြွေနေတယ် ကောင်းကင်ပြာဖို့ အဖြူရောင်ငှက်တွေ ပျံသန်းဖို့ သူ ပေးဆပ်ခဲ့ ငြိမ်းမြတဲ့ ကဗျာ အေးချမ်းတဲ့ အကြည့်နဲ့ ရေးထိုးထားခဲ့ နှလုံးသားထဲ ဘယ်တော့မှမသေဆုံးမယ့် ငါတို့ရဲ့ ငွေလမင်း သူရဲကောင်း ကဗျာဆရာ။ ( ဆရာ မောင်အောင်ပွင့် သို့) ...
လရောင်ဖြာကျ ဆောင်းညရွက်ကြွေ ကြယ်ကလေးရေ – ထက်ဝေး
in: ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ, ရသစာတန်း/ဆောင်းပါး
(၁) လရောင်က ကိုယ့်ကိုလွှမ်းခြုံထားတယ်။ မြို့အ၀င်က ဘုရင်နောင်ရုပ်ထုရှေ့မှာ ကိုယ်ရပ်ရင်း လရောင်ကို ခံစားကြည့်မိတယ်။ လောကဓါတ်တစ်ခွင်လုံး လင်းထင်လို့။ ဒီလိုညမျိုးတွေပေါ့ စက်ဘီးလေးတစ်စီးကိုစီးလို့ မြို့ပြင်က ပန်းခြံလေးရှိရာ ကိုယ်လာတတ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ ...
ကဗျာရေးတဲ့ လက်တွေဟာစောင်းပြီးလည်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို တည့်မသွားအောင် စောင့်ရှောင်နေတာဖြစ်တယ်။သွားပြီ လက်တစ်စုံဟာ...သွားပြန်ပြီ နောက်ထပ်လက်တစ်စုံ။ဗျို့ ကဗျာဆရာတွေဗျို့ ညီအစ်ကို ကဗျာဆရာတွေကမ္ဘာကြီးကို တည့်မသွားစေနဲ့ခင်ဗျားတို့လက်တွေ မြဲပါစေခင်ဗျားတို့ ...
ညီလာခံကြီးမှာ ငှက်​ နဲ့ ငါး က ပုရွက်​ဆိတ်​​တွေကိစ္စ စကား​ပြောကြသတဲ့။ ခက်​တာပဲ ငှက်​ကလည်း ​ လေ ဘာသာစကားပဲ တတ်​တယ်​ ငါးကလည်း ​ရေ ဘာသာစကားပဲ တတ်​တယ်​ တ​ကောင်​ရဲ့စကား တ​ကောင်​နားမလည်​။ နားမလည်​ပဲ သူတို့​ပြောကြတဲ့စကား​တွေကို နားမပါတဲ့ သတင်းစာ​တွေက ...
တိုက်ပွဲဝင် ကဗျာဆရာ(၂)ဦး သို့ ဦးညွှတ်ခြင်း
in: ငါတို့တပ်ဦး, ဒီလဖတ်စရာ
. မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား ... ရဲဘော်ရဲဌေး (ခ) ကဗျာဆရာလူအိမ် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်မှာ ကျန်းမာရေးစရိတ်အတွက် အကူအညီပေးဖို့ ဆရာစံညိမ်းဦးနဲ့တိုင်ပင်ပြီး စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို စီစဉ်နေတုန်းမှာပဲ ဆရာလူအိမ်ဆုံးပြီဆိုတဲ့ သတင်းကို စိတ်မကောင်းစွာ ကြ ...
.(၂)အဲဒီတံတိုင်းရဲ့နောက်မှာသူခိုးကြီးညရဲ့ ကျီးမနိုးပွဲတစ်ခုမှာလိုကံကြမ္မာကာလသားတွေရဲ့လက်ဆော့ထားမှုတွေကိုလည်း ကြားသိရတယ်။ဥပမာဆိုပါတော့လူတွေအများကြီးပါတဲ့တိုင်းသိပြည်သိ လူသတ်မှုကြီးတစ်ခုမှာကားငှါးလို့ လိုက်လာတဲ့ ဘုမသိဘမသိ တက္ကစီဒရိုင်ဘာပဲသေဒဏ်နဲ့ ထောင ...
.အာရုံမရတဲ့အကြောင်း အာရုံထဲရောက်နေတယ်ခုဘဝကနေ နောက်တစ်ဘဝ လှမ်းတွေးကြည့်တော့ဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်းမျိုးရဲ့ လိင်စိတ်ထဲ ခုန်ကူးလိုက်ရမလဲသဲထဲလည်း ရေသွန်ကြည့်တယ်ရေထဲလည်း သဲသွန်ကြည့်တယ်အရသာဟာ အသာမရဘူး ။နာရီထဲ ပြေးနေတဲ့စိတ်ကို ဓာတ်ခဲဖြုတ်ချလိုက်ပြီလားပြတ ...
.စိတ်ကျရောဂါကစိတ်ကြွဆေးတွေ သောက်ထားတဲ့အတိုင်းအားတက်စရာ မတွေ့တော့ဘယ်လိုအားကျရမယ်ဆိုတာပဲ တွေးရတယ်။တစ်ခလုတ် တစ်ခလုတ်နဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းကို မြင်းလုပ်ပြီးလ ကမ္ဘာပေါ်ကို ဒုန်းစိုင်းကြည့်ရင် ကောင်းမလား။ငါနေထိုင်ရာအရပ်ကလေမထန်ဘဲ မုန်းတိုင်းစက်ကွင်းထဲ ကျနေတယ် ...
.(၁)အဲဒီတံတိုင်းရဲ့နောက်မှာနံစော်နေတဲ့ အခန်းတွေ ရှိတယ်။အခန်းတွေရဲ့နံရံတွေက ပေပွလို့။ရုပ်ပုံတချို့ စာသားတချို့နဲ့ အညစ်​အ​ကြေးတချို့။နံရံတွေပေါ်တချို့က မပြည့်ဝတဲ့ လိင်ဆန္ဒကြောင့် ပေါက်ကွဲကြသလိုတချို့က အမှန်တရားကြောင့် ပေါက်ကွဲကြတယ်။(ညစ်ညမ်းစာသားတွေ ...
.မြို့ကိုဝင်​ဝင်​ချင်း ​အေးစက်​သိမ်​​မွေ့တဲ့ တမာရနံ့က ငါ့ဦး​ခေါင်းကိုစပြီးသိမ်းပိုက်​​​တော့တာပဲကား​ပေါ်ကအဆင်း နှင်း​တွေက ငါ့ကိုယ်​​ပေါ် က​သောက​မျောတွယ်​ကပ်​လို့ ​ဆောင်းရဲ့သီချင်းကိုဖွင့်​ပြကြိုဆိုတယ်​မိုး​သောက်​အရုဏ်​ အိမ်​အပြန်​လမ်းမှာငါ ...
လက်ကျန် သက်တမ်း – ဖုန်းမောင်
.အိပ်ရာထတိုင်း ကိုယ့်ဘဝကို အရှင်လတ်လတ် ပြန်မြင်ရတဲ့ အခါအိပ်မက်တွေဟာ ပျက်ပြယ်သွားတယ်။မနေ့က ခြေလှမ်းအတိုင်းဒီနေ့ ငါ လျှောက်လှမ်းနေတာမနေ့က တွေးခေါ်မှုအတိုင်းဒီနေ့ ငါ တွေးခေါ် သွားလာနေတာမနေ့က လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပဲဒီနေ့ ငါ လုပ်ကိုင်နေတာပါ။မနေ့က ငါ့က ...
မြို့ပျက်​ – ဥက္ကာ
.တ​ချို့က လမ်းမ​တွေကို ပိုက်​ပြီး​နွေဦးဆီ ​ခြေဆန့်​ခင်းကျင်း​နေကြ ။တ​ချို့က ​ကျောက်​​ပေါက်​မာ​တွေနဲ့ ​ခေါင်​မိုးကို ရွက်​သက်​တံ့တွေကို ​ဆေး​ကြောသန့်​စင်​ ။​ပျော်​​စေ ပျက်​​စေပျက်​ပြီး မ​ပျော်​ခဲ့ကြသူများ မျိုးဆက်​ဟာ အပျိုမ ရင်​သားလို ​ပျော်ြ ...
လူငယ် – လင်းသက်ငြိမ်
.မလိုအပ်လည်း ခပ်မာမာပဲမကြိုက်တာကို မကြိုက်ဘူးကြိုက်တာကို ကြိုက်တယ်အဖြေက ခလုတ်ဓား အသစ်တစ်ချောင်းလိုလင်းကနဲ ဝင်းကနဲခေတ်က ကျောသပ်ချော့မြူနေတာမဟုတ်တော့မြင်ကွင်းတိုင်းက အနီရောင်မှိုင်းမှိုင်းဆ်ိုတော့စကားလုံးတွေအတောင်ညှပ်ခံခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တွေ ...
မုန်တိုင်းစဲပြီး နှစ်(၃ဝ) – ထက်ဝေး
.သွေးမုန်တိုင်းတိုက်ခဲ့တာအခုဆို နှစ်သုံးဆယ်ကြာခဲ့ပြီအလိုအကိုကြီးမွန်းအောင်ရေသွေးမြစ်တွေ ရဲရဲနီသတဲ့လားအလွှာပေါင်းစုံရဲ့တိုက်ပွဲလှောင်အိမ်ထဲကအလုအယက်တိုးထွက်တဲ့ ငှက်တွေလိုပြန်တွေးရင်ပြန်မျက်ရည်ဝဲရကျွန်တော်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့လူတန်းစားကိုမုန်းတယ်အဲဒီတုန် ...
ကြာကြာတော့ ခံမယ်မထင်ဘူး – ကာတွန်းKzzh
ရင်​မဆိုင်​ချင်​​သော – ခင်မင်းဇော်
.​အဲဒီမှာ စလွဲခဲ့တာပဲ။ကိုယ်​​ပေးတဲ့ ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာမှာမင်းကို​ပျော်​ရွှင်​​စေမှုက ရာနှုန်းပြည့်​။သစ်​ရွက်​​ကြွေ​လေးအ​ပေါ်​တောင်​ ခံစားတတ်​တဲ့ကိုယ်​ကမင်းရဲ့ နားလည်​မှုကို လိုအပ်​ခဲ့တာ​ပေါ့။တိတ်​ဆိတ်​ငြိမ်​သက်​​ပေးခဲ့တယ်​ဘယ်​​လောက်​ကြာမှ မင်းကလှည ...
. ( ၁ ) ၁၉၇၂ ခု၊ နွေနံနက်ခင်းတခု…။ကိုစန်းမောင် (ယခု တရားရုံးချုပ်ရှေ့ နေ၊ပဲခူး)၏ ခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် ဝါးထရံကာ ခြံတခုအတွင်းဝင်လာစဉ် ကျနော်တို့သည် နှင်းဆီခင်းတခုဘေးမှ လျှောက်လာခဲ့ကြ၏။ သုံးဘက်သုံးတန် ထရံကာ ဝါးကြမ်းခင်းတဲတလုံးရှေ့ တွင် လူငယ်တချို့ေ ...
မိုနေးသစ် – အရိုးကျဲလက်​တံ​တွေနဲ့ မြ​စ်​ကွေ့
.ကျ ​နော်​​တို့ရွာက​လေးဆီ ​ကွေ့ဝင်​လာတယ်​ထင်​ရတဲ့ မြစ်​။​နွေရာသီ​ရောက်​တဲ့ အခါ သဲ​သောင်​ပြင်​​တွေ​ပေါ်လာတယ်​။ ​ကျောက်​​ဆောင်​​တွေ​ပေါ်လာ​တော့ ​ရေချိုးဆိပ်​တစ်​ခု ရလိုက်​ပါတယ်​။ သ​င်္ဘော​တွေ ​လှေ​တွေ စက်​​လှေ​တွေ ဆိုက်​ကပ်​ရပ်​နားဖို့ရာ ဆိပ်​ကမ်းတစ် ...
သည် မနက်ခင်းကို တီးခတ်ရတာ… အရသာ မရှိဘူး – အောင်သာငယ်
.သည် မနက်ခင်းကို တီးခတ်ရတာ… အရသာ မရှိဘူး…ဖတ်စရာ ရှိတာတွေ ဖတ်ပြီးရင် ကဗျာ တပုဒ် ရေးမယ်…ညကောင်းကင်ထဲ တိမ်တွေ လှုပ်နေတယ်… လ-ငပုပ်ဖမ်းထားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုပဲ နဖားကြိုးထိုးလို့… ဖုတ်သွင်းရထား လှည်းလမ်းလွဲခဲ့ပုံ…သည် မနက်ခင်းကို တီးခတ်ရတာ… အရသာ မရှိဘူး… ကံ ...
တဖက်ပိတ် – ယောဟန်အောင်
.ဒီမြို့မှာ အမှန်တရားက တခုပဲရှိတယ်အဲဒီတော့ သတင်းမီဒီယာတွေတောင် ပဲ့တင်ပြန်ပြန်ပြောကြ အပိုစကား ဆွံ့အလို့။ဒီမြို့မှာ ဇာတ်လမ်းတွေက တဖက်သတ်ပဲပြောတယ်ရွေးချယ်စရာ အခြားဗားရှင်းဆိုတာ မရှိဘူးဟို ပရိသတ်က ဟိုဖက်အားပေးဒီ ပရိသတ်က ဒီဖက်အားပေး… ဒါပဲ။ ငါ့အိပ်မက် ...
နေတတ်ရင် စင်ကာပူ – နှင်းခါးမိုး
.ကဲ ဘော်ဒါတွေကြက်ကိုကြော်တဲ့ကြက်ကြော် လာပြီနော်၊မီးခိုးနဲ့ညှော်နံ့တင်လှည်းကလေးတိုက်အောက်ရောက်ပြီ။အမှိုက်ပစ်မယ် အမှိုက်အမှိုက်လှည်းထဲက ကလေးကသူမြင်သမျှကို အမှိုက်ပုံလို့ထင်တယ်မြို့ကြီးလည်းအမှိုက်ပုံလူတွေလည်းအမှိုက်ပုံ၊သူတို့သားအမိကိုမြင်ရင်ထိုးထိုးဟောင် ...
နေရာမှားခြင်း – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
.တရား တရားနှုတ်ဖျားက မချ။စကား စကားတရား မကျ။ကားယား ကားယားပွဲများ အစ။ဟိုအနား ဒီအနားသူ့တရား ပါမှ။တရား ကျစရာနေရာတကာ သူပါတော့အများမှာ မျက်နှာပျက်အခက်ဝေပုံ။သူ့နေရာ ကိုယ့်နေရာချင့်ချိန်ကာ မသိဟိုနေရာ ပါချင်ဒီနေရာ လူရာဝင်ချင်''မူ''မပြင်လေတော့ဝန်းကျင်မှာေ...
အဝီစိပဲ ရှိတော့တယ် – ကာတွန်းKzzh
ဆင်ခြင်တုံ – မောင်စိုးသစ်
.အချိန်ဟာ အကန့်အသတ်ရှိတယ်ခုထိ မယ်မယ်ရရပြစရာ အမာရွတ်တွေပဲအဲသဘာဝဘေးကတော့ ကိုယ့်ကို ရှောင်ပုံရတယ်အဓိက ရန်သူကတော့ မင်းပဲ ဒါပေမယ့်သူ အလဲထိုးပေမယ့် မလဲခဲ့သလို တုန့်ပြန်ကာကွယ်တိုက်ခိုက်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေပေါ့..လျော့လွန်းတဲ့ စောင်းကြိုးသံက မြည ...
ဆုတောင်းလေ – အောင်ထိုက်
.နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ် ရက်တိုတိုနဲ့တဲ့ဆုတောင်းလေ ဆုတောင်းတရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေဆုတောင်းလေ ဆုတောင်းပဒေသာပင်ကြီးကို ယုံခဲ့တယ်မွေးလကျော်ရင် ကောင်းမယ်တဲ့ ဗေဒင်ဆရာကဆုတောင်းလေ ဆုတောင်းလိုက်သွားလေရာ လာလေရာ ခလုတ်မထိ ဆူးမငြိပါစေနဲ့ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ...
ကြည်ညိုလွန်းလို့ပါ – ကာတွန်းKzzh
မိုးရက်များ – မောင်ထိန်လင်း(မြို့သာ)
.အရာရာဟာ အေးချမ်းနေသယောင်နဝတခေတ် စဉ်းတီတုံးပေါ်အိပ်ပျော်နေတဲ့ နေ့ရက်တွေလိုပေါ့မဖြစ်မနေများသာ မနေ မဖြစ်တော့လှုပ်ရ ရှားရ ရုန်းရ ကန်ရလှုပ်ရှား ရုန်းကန်ရပေါ့လေသွေးထဲသားထဲက အရက်သမား စစ်စစ်တစ်ယောက်ကလေးတိုင်းကို ကာကွယ်ရတဲ့ အနီမ လင်မယားထီးတစ်လက် ဖိနပ်တကိုင ...
ဆုံမှတ် – ပရ(ပလိပ်)
.စမှတ် နဲ့ ဆုံးမှတ် ဆုံတိုင်း သုည မဟုတ်ခဲ့ဘူး ။တသက်​လုံးကျက်​ခဲ့သမျှအိအိတ်​ထဲက ထွက်​မလာတာအိပ်​ရာဝင်​တဲ့ အချိန်ထိပေါ့ ။လမ်း ဘယ်လောက် ကြမ်းကြမ်းပန်းတွေ ဝေခဲ့ဖူးတယ် ။ပန်း ဘယ်လောက် လန်းလန်းနွမ်းခွေ ကြွေခဲ့ဖူးတယ် ။ထက်ချင်လို့ ​သွေး တစက်​စက်​ အကျခံပြီ ...
တဝက်တပျက် တော်လှန်ရေး – အောင်ထိုက်
.တဝက်တပျက် ကြက်ဥကျော်က ကောင်းတယ်တဝက်တပျက် လိင်မှုကိစ္စက ဒဏ်ရာပဲတဝက်တပျက် ဇာတ်လမ်းက ဘာဆက်ဖြစ်ဦးမှာလဲတဝက်တပျက် ထမင်းအိုး သွန်ပစ်ရတယ်တဝက်တပျက် အနမ်းက အလွမ်းတာရှည်တယ်တဝက်တပျက် အသိဉာဏ်က ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်တဝက်တပျက် ဆက်ဆံရေးမှာ ယုံကြည်မှု ဇဝေဇဝါအနာနဲ့ဆေး ...
ကြည်ညိုထိုက်ပေ ဒင်းတို့တွေသည် – ကာတွန်းKzzh
မင်းရွတ်ရမယ့် အဖေ့ကဗျာ (၁၁) – မောင်လွမ်းဏီ
.ခံတပ်တစိတ်တဝမ်းထဲမို့စိတ်ဝမ်းမကွဲဖို့ပါဆိုပဲလုံးထွေးပွေနှောက်သကာဖုံးတဲ့ဆဲလုံးတွေနဲ့ ပြန်ပစ်ပေါက်ကြတယ်။တောင်ငူက တောင်ငူမောင်းထောင်က မောင်းထောင် မဟုတ်လားအာဃာတ မကြီးပါနဲ့ ဟိုကောင်ကြီးရာမင်း ဈာပန နီးရင် (မင်း ကြားမှာပဲ)ပြန်ဆဲမယ့်အလုံးက တစ်လုံးထဲသြ ...
.အကုသိုလ်ကို အသက်ရှူထားရတယ် ဘယ်ဘဝတွေလာပြီး အသက်ရှင်နေတာလဲ မေးခွန်းတွေကတစ်ရေးနိုးရင် ရေဆာတယ် နေသာတဲ့ တစ်နေ့တော့ မနေ့က အကြောင်းတွေ ထုတ်လှန်းဖြစ်မှာပါ ခေတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို နောက်ခံထားလျက် ရိုက်မယ်နော် ပြုံးထားတဲ့ ။ကိုသက်အောင်11. October. 2018 ...
.ငါ့ ယာခင်းလေး ညနေဆို တိတ်ဆိတ်ရွာထဲက ခွေးဟောင်သံရွာထဲက သက်ပြင်းချသံရွာထဲက ရင်ခုန်သံရွာထဲက အရက်မူးသံရွာထဲက ချက်ပြုတ်သံသဲ့သဲ့ ပြန်ကြားရ ။မနက်စောစော ရောက်လာတဲ့မက်ဆေ့ အရ ည လသာရင်စပယ်တွေ ပွင့်ရအောင်တဲ့ ။ရွာထဲက စပယ် ပန်းလေး သီချင်းသံကြားရပြန်ရော စပယ် ...
“လွဲလွဲကျင့် – လွင့်လွင့်ပျံ” ကာတွန်းKzzh
.လှချင်လို့ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစား။အရောင်ဘာသာဗေဒအယူဝါဒ ဒီဇိုင်းလှလှတွေ။ချုပ်တယ်။ပြင်တယ်။ဖာတယ်။စတိုလ် အလန်းနဲ့ကကွက်တွေကလည်း အဆန်းတောင်ရှည်လိုလိုဘိုလိုလို။ဘယ်လိုဆန်းဆန်းဘယ်လိုလန်းလန်းသမာဓိ အပေါက်ကြီးနဲ့ ပွဲတက်တော့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာအရှက်တွေ ကွဲပေါ့။ ။သု ...
.ပြောင်းဖူးပင်လေးတွေကိုယ်စီလက်အုပ်ချီ ။ပန်းလေးတွေဝတ်ရည်နဲ့မိုးရေမရောဖို့အစွမ်းကုန်ကာကွယ်လို့။လပြည့် လကွယ်ယောဂီရောင်နတ်သမီးလေး။ရေကန်လေးအရပ်မြင့်လာ။တောင်ကုန်းလေးတွေမှာအင်္ကျီသစ် လုံချည်သစ်နဲ့။သတို့သားလောင်းရဲ့အမျှော်လမ်းပေါ်ရွံ့ဗွက်တွေအပြည့်။ ။ ...
.အိပ်မက်ထဲ အိပ်မက်တဲ့အိပ်မက်ကို အိပ်မက်ရက်စက် မည်းနက်ကောင်းကင်အောက်ကမလှ မပဘဝတွေရဲ့ဘဝတွေထဲမှာအသက်တွေ စီးနေရဲ့ဘယ်တော့မှ ပြန်မလှည့်တတ်တဲ့ဘဝတွေ စီးနေခဲ့။စီးနေတာကို စီးပါစေလေသဘာဝအတိုင်းပါပဲမင်းတို့ ဆန့်ကျင်တဲ့အရာကမင်းတို့ကို ပြန် ဆန့်ကျင်ကြတာသဘာဝအတို ...
.ငါက နိုင်ငံရေးပါး မဝဘူးလူပါး နည်းနည်း ဝတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူလူသူသူဖြစ်အောင်လူလိုပဲ နေခဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအစိုးရကို မချစ်ဘူး မမုန်းဘူးမဆန့်ကျင်ဘူးမဆက်ဆံဘူးကင်းကင်းနေတယ်ကိုယ်ဉာဏ်မမီတဲ့ အလွှာက ဆိုတော့လေစိတ်မဝင်စားဘူးမြို့တွေ ရွာတွေ လူတွေကပ်ဘေးတေ ...
.ဘာအရောင်မှန်းမသိလို့အမှောင်ကို ဖြဲကြည့်ရတာ အမောသူတို့မကြိုက်တာနဲ့ငါက လူမိုက်ကြီး လုံးလုံး။အလျားလိုက်လားဒေါင်လိုက်လား ဟားတိုက်သံတွေက ခပ်စောင်းစောင်းပဲခေါင်ခိုက်နေတဲ့ စိတ်ကိုတွဲလောင်းချည်ထားရ။မီးမတောက်လည်းနေပေါ့ရှိသလောက် အပြုံးကိုဖွင့်မှရင်ထဲမှာ ...
.သစ္စာဖောက်မှုအပေါ် သစ္စာစောင့်သိပုံများငရဲထိန်းကြီး လက်ထဲက ခွေးကြီး တဟဲဟဲသူ တူးခဲ့တဲ့ အသိုက်ဟာခင်ဗျားနဖူးက လူတန်းစေ့သိုက် ဖြစ်တယ်သူ တူးခဲ့တဲ့ အမြစ်ဟာခင်ဗျားဘဝရဲ့ ရေသောက်မြစ် ဖြစ်တယ်သူ တူးခဲ့တဲ့ ချောက်ဟာခင်ဗျား စုန်းစုန်းမြုပ်ဖို့ အသူရာချောက် ဖြစ်တယ ...
သူရဲကောင်း – ကာတွန်းKzzh
.ရာသီ​တွေ ​ပြောင်းတယ်​နည်း​စနစ်​​တွေ ​ပြောင်းတယ်​မူဝါဒ​တွေ ​ပြောင်းတယ်​​မော်​လီကျူး​တွေ ​ပြောင်းတယ်​ကျက်​စားရာ​တွေ ​ပြောင်းတယ်​အသိုက်​​တွေ ​ပြောင်းတယ်​မြို့​တွေ လူ​တွေ ကစားကွင်း​တွေပြဋ္ဌာန်းကျမ်း​​တွေ အနုပညာဖန်​တီးမှု​တွေလမ်း​ဘေး​ဈေးသည်​ ...
.ဒါဟာ သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ်ဆီက သံရှည်ဆွဲ အူလိုက်တဲ့ဥပဒေဆိုတဲ့ 'ခွေးအ'တစ်အုပ်ရဲ့အသံဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဟာ အရှက်နဲ့သိက္ခာတရားကို အစိုးရလို့ ခေါ်တဲ့ မလုံမခြုံ သစ်ခက်လေးတွေ ဖုံးလို့ ''ဘာ!လူအခွင့်ရေးဟုတ်လား''ရှင် ဇာတ်ထဲလိုက် ပြက်လုံး ထုတ်ပါ့လား''ပြည်တွင ...
.ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော်လှန်ရေးလို့ မြင်နေတာလည်းရှေးဘဝက ကုသိုလ်နည်းခဲ့လို့ထင်ရဲ့ဒီလိုပဲ ပုံချမိပါတယ်ကလိုရိုဖီးလ်နဲ့ ဓာတုပစ္စည်းခင်ဗျား ဘယ်မှာရှင်သန်မလဲမုန်တိုင်းတစ်ခုကနေရှောင်လွှဲသွားစရာ မလိုပါဘူးကျုပ်တို့ ရှုမျှော်ခင်းကြီးကလည်းအပျိုရည်ပျက်ေ ...
.မရယ်နဲ့နော်အသားစက အရက်ခွက်ထဲပြုတ်ကျသွားတယ်။အမှန်တရားက မမူးဘူးအော်သံဟာ ချိတ်ထားတဲ့တိုက်ပုံထဲကေ၏ ချွေးနံ့မမြင်ကွယ်ရာမှာ ခိုးငိုနေလည်း အရာမရောက်ပါဘူး။သတ္တုဇွန်းမှာလည်း ခံစားချက်ရှိတာပဲကလေးကစားကွင်းမှာလည်း အဆိပ်ရှိနိုင်တာပဲအတ္တဟာ မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်ထဲက မီ ...
.လွတ်လပ်လှိုင်း တဲ့ငါ့မှာတော့မလွတ်မလပ်ပါလားအသက်ကကြီးအပင်ကအိုတော့ငွေပန်းလည်းမပွင့်တော့ဘူးလွတ်လပ်လှိုင်းမှာကဗျာမပါတော့ဖုန်းဘယ်လည်း မဖြည့်နိုင်တော့ဘူးလွတ်လပ်လှိုင်းရေငါ့ပင်အိုကပန်းမပွင့်လည်းရှိပါစေကျန်အပင်အားလုံးပန်းများဖွေးဖွေးလှုပ်ပွင့်ပါစေ။မောင်ကြူး ...
." နောက် မှ " ဆိုတာ သေတာကလွဲရင် ဘာတခုမှမကောင်းဘူး ငါ့တူရေ ဒီတနှစ်ကတော့ နောက်သီး မျှော်ရမယ့်ကိန်း ကျိန်းသေ ဆိုက်နေပါပကောကွာ … မိုးလေဝသ သဘာဝဘေး ပြေးမလွတ် ရှောင်မလွှဲသာတဲ့ ယာသမားဖြစ်ခဲ့မှတော့ ရှေ့သီးနှံ မဟန်လေသမျှ နာလန်ထမယ့်ပုံ မပေါ်လည်းခါးစည်းခံရရံ ...
.နှာခေါင်းပေါက်ထဲကို ဝင်ဝှေ့တဲ့လေမှာပန်းရနံ့မရတာကြာပြီ။လူငယ်တွေရဲ့အရေပြားပေါ်က အရုပ်များလိုငြိမ်းချမ်းရေးကို ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်စေလိုမိ။မိမိကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်ပါလက်သန်းလေးကို ပြန်ကြည့်ပါငါ ဘယ်အထိ ရောက်ခဲ့ပြီးပြီလဲ။ပန်းသည်မလေးရဲ့ အော်မြည်သံတွေထက်သားသတ ...
ကဗျာဆရာ – နွေမိုးစက်(မကွေး)
.နှလုံးသားနဲ့ အများဆုံး အလုပ်လုပ်သူဦးနှောက်ကနောက်မှာ ကျားကန်ထားတယ်သူများအနာကိုကိုယ့်ဒဏ်ရာအဖြစ် ပုံဖော်လို့်သူများလိုအပ်ချက်ကိုကိုယ့်လိုအင်အဖြစ် ဆေးခြယ်လို့အမှန်တရားနဲ့ အနုပညာဟာသူမှီဝဲနေကျ ယမကာပိုင်းပေါ့အများပျော်ရင် လိုက်ပျော်ဖို့ မသေချာဘူးအများ ...
ထူနေတဲ့ ဆေးသားတချို့ကို ခြစ်ထုတ် – ဝင်းဌေးဦး
.ကိစ္စရှိခဲ့တယ်သရုပ်လွန်တွေ တအိအိပြိုကျခဲ့ ။ငါ နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ငါ့ လက်တွေကငါ့ ဘဝ လက္ခဏာရေးမှာဆေးသားတွေ ပိန်းနက်နေတယ် ။ငါ ကျေနပ်နေခဲ့တာပါငါ့ဆေးရောင်တွေထဲ နစ်မြုပ်နေမှုတွေ ။အစွယ်ထွက်နေတဲ့ အသံတွေကဘောင်မရှိတဲ့ ဝါးတစ်လုံးစီပဲ ။မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာပါးလွှာတဲ့ ...
ရွှေရည်စိမ် – ခိုင်ဇော်(ပလိပ်)
.ခေတ်က...စစ်အာဏာရှင် အရိပ်အောက်တိတ်တိတ်လေး လှဲနေရတာနဲ့ခပ်ချေချေ ထ, ထ အော်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေးပိုရခဲ့ရုံလေးပါပဲ...။ဒါနဲ့များ...အတိတ်က အရိပ်တွေကိုနေရောင် ကွယ်မသွားမချင်းလွယ်ထားချင်ကြတယ်...။ကျားဆွဲစေချင်လို့နွားခွဲ ခံနေရတာလည်းအသည်းမှာ စာရေးမထားမိတဲ့န ...
အိမ်ပုံပြင် – မိုးကျော်ဌေး
.ဦး​ခေါင်းတလုံးထဲကလ​ရောင်​​တွေ ပန်းထွက်​လာတဲ့ ညမှာကြွက်​​​တချို့ကကြယ်​​​ကြွေတွေကို ကိုက်​ချီစု​ဆောင်းကြတချို့ကြွက်​​တွေက​ကြောင်​မရှိ​သောအရပ်​၌သာကြွက်​ဖြစ်​လို​ကြောင်း ဆု​​တွေတောင်းလို့ သူတို့အထဲ​ခေါင်း​ဆောင်​ဖြစ်​ဟန်​ရှိတဲ့​ရှေ့မီ​နောက်​မီ ...
ရွေ့နေဆဲ အသေတွေ – မောင်ရင်ဆု
.မုသား မသိတဲ့နှုတ်နဲ့မိုးသောက်ရမယ့် မနက်ဖြန်ကိုမျက်နှာ မမူသိမ်မွေ့တဲ့ အကျင့်အမူ မဲ့နေတဲ့ လူရွေ့နေတယ်သူ ရွေ့နေတယ်သူလိုလူတွေ ရွေ့နေတယ်လူတွေ သူလိုရွေ့နေတယ်ငါ မပြောချင်ဘဲငါ ပြောနေရတဲ့စကားဟာသစ္စာမဲ့မှုအကြောင်းသူလို သူလိုလူတွေရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဟာအကျိုးစီးပွ ...
မျဉ်း/မြင်း – ဉာဏ​ကျော်
.မျဉ်း​တစ်​​ကြောင်း​ပေါ် မြင်းတစ်​​ကောင်​ခုန်​တက်​ခဲ့မျဉ်း​တစ်​​ကြောင်းအတိုင်း မြင်းတစ်​​ကောင်​​ပြေးခဲ့မျဉ်း​ဟာ ဖြောင့်​တန်း​နေတဲ့အခါမြင်းဟာ​ ဖြောင့်​တန်း​နေခဲ့မျဉ်း​ဟာ ကွေ့​ကောက်​​နေတဲ့အခါမြင်းဟာ ​ကွေ့​ကောက်​​နေခဲ့။မျဉ်း​ပေါ်မှာ မြင် ...
အားပေးစကားလေးများ – လေပြည်ချမ်းချမ်း
.  ပင်​လယ်​ကို ကူးဖြတ်နေတဲ့လူတစ်​​ယောက်​ရယ်​ ။ကမ်း​ပေါ်က ရပ်​ကြည့်​​နေတဲ့လူနှစ်​​ယောက်​ရယ်​ ။မိုးချုပ်လုညနေမှောင်ရီရီကို ကိုယ်​​ယောင်​ပြ​ပေး​နေတဲ့ကြယ်​က​လေး​တွေရယ်​ ... ရှိတယ်​။  ‘ပင်​လယ်​ကို ​ကူးဖြတ်တဲ့သူ’ က ကူးနေရင်းတွေးမိတယ်။‘အို ... ဒ ...
တံခါး ဖွင့်ထားတယ်စိတ်က ပိတ်မိနေတယ် – ဖုန်းမောင်
.တံခါးများ ဖွင့်ထားတယ်စိတ်က ပိတ်မိနေတယ်တံခါးများ ပိတ်ထားတယ်စိတ်က ထွက်ပြေးနေတယ်တံခါးတွေက လူတွေရဲ့စိတ်ကို လုံခြုံမှုရှိအောင် ဖုံးကွယ်ပေးထားတယ်ဘာကိုမှ မမြင်ချင်တော့တဲ့ အခါ တံခါးတွေ ပိတ်ထားလို့ရတယ်လေပြေအေးတွေကို အိမ်ထဲ သွင်းလိုတဲ့အခါတစ်စုံတစ်ယောက်ကို ...
ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် – နေရိုင်း
.သောက်ရမ်းလှတဲ့ ငါတို့ဘဝတွေကို ဖာထေးနေရတယ်အဲ့ဒီထက်လှတဲ့စကားလုံး သုံးရရင်အမေ ကျွန်တော်တို့ကို နားမလည်သေးပါဘူး။ညက ဝက်အူချောင်းတွေကို အိပ်မက် မက်တယ်ဘုရားကျောင်းက ဖာသာကတော့ပြောတယ်မင်း မစားနဲ့အုံး မင်းထက် ငတ်တဲ့သူတွေ စားပါစေတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် ကွ ...
မီးပုံးပျံ – ထိန်​​အောင်​လင်း(ဥသျှစ်​ပင်​)
.​လောင်​စာတပ်​ပြီးပြီမှိုင်းဖြည့်​ပြီးပြီမီးညှိလိုက်​ပြီလက်​ခုပ်​သံ​တွေကြားရပြီပျံတက်​ဖို့ အသင့်​ပြင်​လိုက်​ပြီပြန်​ကျဖို့ အသင့်​ပြင်​လိုက်​ပြီ။ထိန်​​အောင်​လင်း(ဥသျှစ်​ပင်​) ...
စိတ်အခွံထဲ တိမ်တွေပြာတုန်းက – ထက်ဝေး
.အရိုင်းစိတ်မွဲမှာရိပ်ကနဲ ပါသွားတဲ့နေ့ကအသံနဲ့အသွင်မှာ ဖျတ်ကနဲ ကျရူံးကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမလိုက်ရတယ်လရောင်က ကိုယ့်ကို ညှို့တုန်းသူမအပေါ်ကျွံကျခဲ့တဲ့ အချစ်တွေပြာလို့အလွမ်းပင်တွေ မစိုက်သင့်တော့ဘူးရင်ခုန်သံကို ချိုးပစ်လိုက်မိပေါ့ငှက်တွေ အုပ်ဖွဲ့ပျံသွာ ...
သရုပ်မှန်ကဗျာဆရာများ – ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
.သစ်​ပင်​ကြီး လဲကျ​သွားသစ်​ခုတ်​သမားများ​ချွေး ​သွေး အသက်​ ဘဝ​တွေသစ်​ခုတ်​သမား​ အားလုံးရဲ့ဘဝ​တွေဘဝ​တွေနဲ့ ရင်းလဲကျသွား သစ်​ပင်​ကြီး ...ခုတ်​ရုံ ထစ်​ရုံ တတ်​ရှာကြသူများဒီသစ်​ပင်​အသားနဲ့သူတို့အိပ်​မက်​​ထဲကအဆင်းလှ ပန်းပုရုပ်​များသူတို့ကိုးကွယ်​လ ...
ပျောက်ဆုံးခြင်း အောက်က ခေါင်းစဉ်နဲ့ အသက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတော် – ကျော်ဇံလှ(ကလေးဝ)
.ပျောက်ဆုံးခြင်းတွေနဲ့တို့နိုင်ငံတော်အဖွင့်ဟာသတင်းစာ တချပ်ရဲ့ အရေးပါတဲ့မနက်ခင်းတခုပါ့။အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အနာဂတ်တွေကို ဘယ်လိုအဖတ်ဆယ်ကြဘယ်လိုများ ကယ်တင်ကြပါ့မလဲ။တောမှောက်သွားတဲ့ သားကောင်လေးတွေခမျာနိုင်ငံတော်က မှောက်ချလိုက်တဲ့ ...
စိတ်​ကူး – နွေလင်းသစ်(စစ်ကိုင်း)
.လက်​မဆန့်​ဘဲ​လှမ်းနိုင်​တယ်​​ခြေမဆန့်​ဘဲသွားနိုင်​တယ်​အလင်းကို​ မှောင်​​စေအ​မှောင်​ကို လင်း​စေလွတ်​လပ်​စွာ​​ပေါက်​ကွဲသွားရင်​ကမ္ဘာကြီးတောင်​နှာနှပ်​ယူရမယ်​ ။ ​နွေလင်းသစ်​ (စစ်​ကိုင်း) ...
မနက်ခင်းနုသစ်စ – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.မြေပဲရွက်လေးတွေနဲ့ငှက်လေးတွေဘယ်သူက အိပ်ရာအရင်ထတာလဲ။လေကအိပ်ရာထနောက်ကျနေတယ်သစ်ပင်တွေဟာငြိမ်လို့။အမေသင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းမျက်နှာကိုရေနဲ့သစ်ပြီးစိတ်ကို တရားနဲ့သစ်လိုက်တယ်။ဇနီးကထမင်းဟင်းချက်တဲ့ စက်ရုံထဲမှာ။သားကကျောင်းစာအုပ်ဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့စာလုံး ...
သေလူ – ဖုန်းမောင်
.သေလုမျောပါး ခံစားရပြီးနောက်မှာကျန်နေခဲ့လည်း ဘာမှ မထူးပါဘူး။မင်းတို့ ရှေ့ဆက်သွားကြမင်းတို့ ငါ့ကို ချန်ထားခဲ့ကြမင်းတို့ ငါ့ကို သေတွင်းမှာပစ်ထားခဲ့ကြပစ် ထား ခဲ့ကြပစ် ထား ခဲ့ကြ။ငါက သေလူပါ၈၁ ကနေ၂၀၁၈ အထိမသေသေးတဲ့ သေလူပါ။ရင်ဘတ်ကို ထိမှန်ရင်ချိုသာ ...
ကိုယ့်မြို့ကို တောက်ခတ်မိခြင်း – သူ့ထက်ကဲ(မန်း)
.အန္တရာယ်ကက်ကင်းမိနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဟာဘားဆိုင်တွေမှာ တရားသံ ကြား ကြားနေရတယ်မဆီမဆိုင် ပေါက်ပေါက်လာတဲ့ အမျိုးတွေကတော့မျက်စိလည်လေ ဆန်ပိုရလေဦးသူတော်ထုံး နှလုံးမူလို့။တစ္ဆေသရဲတွေညတိုင်း ပေါက်ပေါက်လာတဲ့အခါကိုယ့်ရပ်ဆွေ ကိုယ့်အမျိုးတွေကိုလက်ယက်ခေါ်ဖို ...
လမ်း​ပေါ်တက်​လာတဲ့ ​ချောက်​ကမ်းပါး – မိုးဦး​ဆွေညိန်း
.အဓိပ္ပာယ်​မဲ့​တေးသွားနဲ့ အချိုးမကျတဲ့ကခုန်​မှုအခုလို အမြဲစိမ်း​တောအုပ်​ထဲမှာ ပိတ်​​မိ​နေပုံနဲ့ဆို​လျှောက်​​သောလမ်းဟာ စမ်းတဝါး​မြွေ ဖား လိပ်​ ဆင်​ ... အမျှင်​တန်းစရာဘဝဟာ ​လေး​ကောင်​ဂျင်​ ဝင်​ထိုးတာမှမဟုတ်​ဘဲ​ချောက်​နက်​နက်​ထဲ ​လေထီးမဖွင့်​ဘဲသ ...
အမှောင် ……သို့– သင်းရည်လွင်
.စကားတွေ မအိပ်သော ညတစ်ချို့ ရှိတယ်နံရံတွေ ဒီအတိုင်း အမှောင်ကို ငေးနေတသွေးတသားထဲ မှောင် နေတာများသူ့ ဘဝကို ကိုယ်ကမှောင် လို့ မရောက်သေးတဲ့ မြို့ အသစ်လေး ကိုဆောက်လက်စ ထားခဲ့ကြ တယ်ဟို တစ်ခါတုန်းကပေါ့ တိမ်တွေ လဲ ပြိုပြို နေရင်း သူ့ သွေးကြောက ဆန့် တန ...
ငါတို့စိုက်ပျိုးရေး – လျှမ်းအောင်
.မုန့်လုံးကို စက္ကူကပ်တာလားစက္ကူကို မုန့်လုံးစက္ကူကပ်တာလား။ကြားဖူးသမျှပါနီကလာ ပါနီ ထဲသွား။ကြုံရသမျှတော့အပင်က လာသမျှ အပင်ထဲ သွားပဲ။စေတန်ရာသီနဲ့ ဖျက်ပိုးစွမ်းအင်မှာစားပြီးသောက်ပြီး ငါတို့လက်ရုံးပဲ ကြီးလာတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုအဆင်မပြေတော့ မြေကြီးက ရွှေသီးတဲ ...
ဂီတနှင့် … ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
.ကျေးဇူးတင်တယ် နှိုးစက်လေးအဆိပ်ပြင်းအိပ်မက်တွေထဲက လူးလဲထ မနက်ခင်း ပြတင်းအဖွင့်မှာ ...လွင့်လိုက်ပါ လွှင့်ခဲ့ပါ လွင့်လိုက်ပါမှိုင်းညို့မိုးတိမ်တွေဆီက ဂီတပျံသန်းပါ ရှာဖွေပါ ပျံသန်းပါရဲရင့်ငှက်ငယ်တွေဆီက ဂီတရှင်သန်ပါ စိမ်းလန်းပါ ရှင်သန်ပါရင့်ကျက်သစ်တောေ ...
လော်ပြိုင်ပွဲ – မောင်ထိန်လင်း(မြို့သာ)
.သင်္ကြန်မီးသတ်ပိုက်နဲ့မျက်နှာအထိုးခံရသလိုပဲအိမ်နားက ဘုရားပွဲထဖြစ်တယ်ကြွက်ဖောက်အပေါက် မချန်ပိတ်ဟယ် ဆို့ဟယ်အားတင်းထားပါ အိုးစားဖက်ရေ…. ကနားစည်ပေါ်တက် အီးပါနေတယ်မာမာအေးက သူ့နောက်ကနေယောက်ဖရေ ခေါ်နေသတဲ့ခဏနေပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး ကြွလာလိမ့်မယ် ကြည့်သာဓုဆိုတာ ...
စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း – ကာတွန်းKzzh
တ​ခါက လမ်း​တွေ – ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ
.သမိုင်းဟာ ​၄၅ လမ်းနဲ့၇၅ လမ်းကြားမှာ​နေရဲ့ ။ ၄၅ လမ်းနဲ့၇၅ လမ်းဆိုတာဟာ လျှာထွက်​ပြီး ​ ‎​သေသွားတဲ့ လူငယ်​တစ်​​ယောက်​ရဲ့​နွေး​နေဆဲ နှလုံးသား​လေး။ ‎လမ်း​တွေကို စာလုံး​ပေါင်းတဲ့အခါ ​ဘောင်းဘီချွတ်​​နေတဲ့ အာဏာရှင်​ ဘဘကြီး ​ရှေ့ က ‎​ကောင ...
မူဆယ် – မိုးညဖြူ
.ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် ၂၇၀၀ အမြင့်ပေါ်က မြို့ကလေးတောင်တန်းတွေနဲ့ သိပ်ကိုလှတယ်မြူတွေကတော့ အုံ့ အုံ့ မှိုင်းမှိုင်းရှမ်းအိုးစည်သံ တညံညံနဲ့ လွယ်ပလိုင်းနဲ့ ကနေကြတာငေးကြည့်ရလောက်အောင်ရိုးရာဓလေ့ကို ခုံမင်ကြတယ်။ခေတ်နဲ့ တွဲယှက်ထားတဲ့ မြို့ကလေးဟာစရိုက်တော့စ ...
မြူ​တွေ – မင်းချောမြင့်
.မီးပုံပျံကြီးလည်း မစီးချင်​​တော့ပါဘူးတ​နေရာရာမှာ လိုက်​ပါဖို့ ပြီး​တော့ ​နေရာရဖို့အကုသိုလ်​လေး​တွေလည်း အနည်းအများ​တော့ရှိတယ်​လွတ်​တဲ့ ငါးက ကြီးစမြဲလူ့သဘာဝအ​လျောက်​​တော့ အလိုအ​လျောက်​တုန့်​ပြန်​​နေတာစကား​တွေ ထိန်းသိမ်းနေရတာ​မွှေးထားတဲ့မီးခို ...
ကိုယ်တိုင်ရေးနိုင်ငံတော် – နောင်မင်းခိုင်
.လမ်းပေါ်မှာ အလေအလွင့်တွေများလွန်းလို့စနစ်တကျသိ မ်းဆည်းလှဲကျင်းလိုက်မှဖုန်တထောင်းထောင်း ထနေလိုက်တာMask တွေ ဈေးတက်လာတဲ့အထိပဲစီးပွားရေးဆိုတာ ကြီးပွားရေးကိုပဲ ရှေးရှုတယ် ။ပြည်ပ ပစ္စည်းတွေဝင်လာတယ်အန္တရာယ်ကများ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ တနင့်တပိုးမျက်စိမှိတ်သ ...
သားကောင် – ပင့်ကူအိမ် (ဆားလင်းကြီး)
.ငွေရေး ကြေးရေးကို အငမ်းမရ လိုက်ဖမ်းနေနွေးထွေးခြင်းဟာ သဲကြိုးပြတ် ကျွတ်ကျစိတ်ဖဝါးမှာ ဆူးအစုံစုံ နစ်ဝင်ခဲ့ ။နေထွက် နေဝင် ဝမ်းစာရေးတွေနဲ့ မူးယစ်ကြည်နူးဖွယ်ဟာ ဝစ်လစ်စလစ်ရေသောက်ရတာတောင် ခပ်ရှက်ရှက်ပဲ ။နေတွေသာ အဝင် အထွက် သူ့ နရီနဲ့အားကျမခံ ငါ့ ဒုက္ခဟာ ...
ရှစ်​ဆယ့်​ရှစ်​ – နွေလင်းသစ်​(စစ်​ကိုင်း)
.အက္ခရာ​​​တွေကို တစ်​လုံးစီတစ်​လုံးစီချပြီး​စီးတန်းလိုက်​​​တော့ ...ဒီေ​ခတ်​ရေစီး​ကြောင်းထဲမှာအ​ရေး​တော်​ပုံဟာ ​သွေးမတိတ်​​ခဲ့ဘူးမြေ​ပေါ်မှာဆူညံစွာ​အော်​ဟစ်​ကြတာငါ့တို့နား​တွေနဲ့ ဆတ်​ဆတ်​ကြားခဲ့ရတယ်​သူတို့​တွေ ..တိုင်းသိပြည်​သိထက်​တိုင်းပြုပြည ...
ပန်းတို့ရဲ့သွေး – ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
.ကမ္ဘာမကြေတဲ့ ဒီသီချင်းကိုသံပြိုင်ဆိုခဲ့ကြတာ ဘယ်နေရာလဲ …အရောင်စုံတဲ့ ဒီပန်းတွေကိုဒီလိုခြွေချခဲ့တာ ဘယ်အချိန်လဲ …အပ်တစ်ချောင်းမျှ ကိုင်မထားသူတွေကို​သေနတ်​ဆိုတာ မိုး​ပေါ်​ထောင်​မပစ်​ဘူးတဲ့စိမ်ခေါ်ရဲခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ …အရောင်တူဒီသွေးတွေ တစ်နေရာတည်းကို စီ ...
ပြက္ခဒိန် သုံးဆယ် – သင်းရည်လွင်
.လူ ရေစီးကြောင်းကြီး စီးတယ် တဟုန် ထိုးဒေါသ ထယ်ရေး ညက်ညက်အဲသည့်နေ့ က မိုး က ဒီနေ့ လို ပဲရွာတယ်ပုလ္လင်ပေါ်က မျောက်ကလေး ခုန်ချသွားတယ် လို့ သမိုင်းလမ်းဆုံ မှာပြောပြော ဆိုဆိုအနှစ်သုံးဆယ် ဘဝ ပြားပြား တွေ ထဲဖောင်းနေတာ ဆိုလို့အဲဒီ စိတ်ကလေး နဲ့ ရှင် ရ ...
၈၈၈၈ – လူမျိုးလွင်
.အဲဒီတုန်းကကျွန်တော်ဟာ ၂၁နှစ်သားကလေးခုချိန်မှာတော့ ၅၁ သားကြီးနှစ်ပေါင်း ၃၀ ပြည့်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ ဘာတွေပြောင်းလဲခဲ့ပါသလဲ။လမ်းထဲကဆိုင်းဘုတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ရပ်ကွက်ထဲကအုပ်ချုပ်သူတွေပြောင်းသွားတယ်ဥပဒေတွေပြောင်းသွားတယ်တံဆိပ်တွေပြောင်းသွားတယ်သင် ...
သွေးမျက်ရည်တို့ရဲ့သမိုင်း – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
.ရှစ်လေးလုံးလို့ချရေးလိုက်တာနဲ့မဝင်းမော်ဦးတွေ ထွက်ကျလာတယ်။ကျောင်းတံခါးတွေ ပိတ်ကျောင်းသားတွေ တွန်းကန်လာတယ်။မြို့ရွာတိုင်းဟာဖိနှိပ်မှုတွေ တွန်းလှန်ဖို့လမ်းတွေပေါ် ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ရှစ်လေးလုံး လမ်းမထက်သွေးအစက်စက်နဲ့ လမ်းပြဒီမိုကရေစီ လမ်းအစဖြစ်ခဲ့။ရှစ်လေး ...
မေ့မရခြင်း ဖြစ်စဉ် – ခိုင်ဇော်(ပလိပ်)
.အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးတဲ့အထဲအနှစ် သုံးဆယ် ရွေ့သွားတာလည်းမေ့မရတဲ့အထဲမှာ ပါတယ်...။သမိုင်းဟာနှစ် ဘယ်လောက်ကြာမှဖော်ပြခံရသလဲ...။အာဇာနည်ဆိုတာအသက်သေပေးမှခေါ်လို့ရတာလား...။နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာစွန့်လွှတ် အနစ်နာနဲ့ထောင်ကျခဲ့မှသာနိုင်ငံရေးသမားစစ်တာလား...။အနှစ် ...
တော်လှန်ရေး – မောင်ရင်ဆု
.ဒို့အရေး ဒို့အရေးအောင်ရမည်အောင်ရမည်အဲသည်လူထုချီတက်ပွဲထဲကဆယ့်ကိုးနှစ်သားကဗျာဆရာငါအနုပညာဟာ တော်လှန်ရေးပဲတော်လှန်ရေးဟာ အနုပညာပဲလို့ခုထက်ထိခံယူတယ်ဒို့အရေး ဒို့အရေးအောင်ရမည်အောင်ရမည်အဲသည်ညီညာဖြဖြကြွေးကြော်သံဟာတစ်ပါတီစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်နိုင်တယ်ဒို ...
.ကျနော်တို့ကို တချို့ကပြောကြတယ်“ပညာရေးစနစ်ဆိုးကြီးရဲ့ အစမ်းသပ်ခံတွေပေါ့” တဲ့ကျနော်ကတော့ အဲဒီလိုကို မထင်ပါဘူး။အမှန်တော့ ကျနော်တို့အားလုံး အစမ်းသပ်တောင် မခံခဲ့ရဘဲအစတေး ခံခဲ့ကြရတာ။ကျနော်တို့ ချကျွေးခံလိုက်ရတာပါ။စနစ်တကျဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တဲ့ ပညာရေးစနစ်ထဲမ ...
ငါတို့ဟာ လူငယ် – ညီသစ်လူ
.ငါတို့ဟာ လူငယ်သူတို့လည်း လူငယ်တွေပါခေတ်တခေတ်ရဲ့ ဓာတ်စာအတွက်တော့အကြိမ်ကြိမ် သွေးထွက်သံယိုပဲအာဏာရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး ပစ်ကွင်းဆိုလည်းမမှားပြန်ဘူး....ခရိုနီရဲ့ အိပ်မက် စစ်စစ်တွေ အောက်မှာအခါခါ ဇာတ်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးရဲ့။ငါတို့ဟာ လူငယ်သူတို့လည်း လူငယ်တွေပါ ...
ငါတို့လူငယ် ငါတို့လူမမယ်တွေ – ချောဘသစ်
.မျက်နှာချေတွေ ဖွေးနေတဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်ရှေ့ငါတို့ လူငယ်တွေဟာ ဘဝကို ဝါး အနာဂတ်လမ်းပေါ် ကြံရာမရတွေ တပျစ်ပျစ် ထွေးလို့ငါတို့ လူငယ်တွေဟာအိပ်မက်တွေ ရှိုက်ဖွာရာဘ ဆေးပြားလေးတွေမှာ နိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့ညလုံးပေါက် ဂိမ်းနေ့လုံးပေါက် အင်တာနက်မဖွယ်မရာ အတတ်ကို သင်ကြ ...
​ရှေ့သို့လှမ်းချီ ပန်းတိုင်​ဆီ – ဘုန်းဉာဏ်
.ချုံနွယ်ပြိန်းမြက်တောင်မတ်မတ်လည်းလှမ်းတက်​​ကျော်​ဖြတ်​...​ရှေ့သို့ဆက်​..။ရေပြင်​နက်​နက်​ဝဲဂယက်​လည်း​လှော်​ခတ်​ ​ကျော်​ဖြတ်​...​ရှေ့သို့ဆက်​..။အာကာမိုးထက်​​လေပြင်းခတ်​လည်း..ပျံတက်​​ကျော်​ဖြတ်​...​ရှေ့သို့.ဆက်​..။သူရိန်နှင်းစက်မိုးမာန်​ဖျက်​လ ...
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်စိတ်ဓာတ်တွေ – ချောမွှေး
.ဒါက အတု ..အစစ်က နောက်မှလာမယ်အာဏာလိုချင်လို့ အာဏာသိမ်းလိုက်​တယ်​ဆူဆူပူပူလုပ်​မယ်​ မကြံနဲ့ဒါ စစ်​တိုက်​တမ်း ကစား​နေတာမဟုတ်​ဘူးဆန္ဒပြတဲ့ကောင်တွေကိုသတ်နေတာအဲဒီ​နေ့ကလူမုန်းများတဲ့ အာဏာရူးစကားဆိုတာမိုးပေါ်ထောင်မပစ်တဲ့ သေနတ်လားကမ္ဘာကျော်သရုပ်ဆောင် အထ ...
လူ့ ဂုဏ်​သိက္ခာ – ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
.​မေးချင်​တယ်​။တို့ကဦး​ခေါင်းထဲမှာ ဦး​နှောက်​မပါဘူးလား။တို့မှာလက်​​တွေ ​ခြေ​ထောက်​​တွေ မပါဘူးလား။သူတို့လုပ်​ချင်​တိုင်း လုပ်​​နေသမျှငြိမ်​ခံ​နေကြရင်းတို့ဘဝ​တွေ​ကြွေရမှာလား။အကုန်​​ ယူသွားပြီးသားတို့အတွက်​ ဆုံးရှုံးစရာဘာများ ကျန်​​သေးလို့လဲ။ထပ်​ ...
မြစ်တွေဆီက ရောက်လာတဲ့ နာမည် – သင်းရည်လွင်
.သူ့ အလှည့်ဆိုတော့ အစွမ်းကုန် အဟုန်ပြင်းပြင်းကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ်းပါးတခုမှာ ငေးကြည့်ခဲ့ကြသူတို့က ရိုက်ပုတ်စရာ လှိုင်းတွေပါတယ်သူတို့က အမည်းရောင် မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က မျောလာတဲ့ အမှိုက်တွေကျွန်တော်တို့က စည်သွတ်ဗူးထဲရောက်မယ့် ငါးသေတ္တာလို ...
သွေးနဲ့ရေးတဲ့ကဗျာ – ဝင်းမင်းစိုး(မိထ္ထီလာ)
.ဆူညံမှုထဲမှာအော်ခဲ့ရလွန်းလို့တိမ်ဝင်သွားတဲ့ အသံတွေအတွက်စွင့်ထားရတဲ့ နားတွေကဘယ်တော့မှ မလေးဘူး ။အမှောင်ထုထဲမှာလျှောက်ခဲ့ရလွန်းလို့အသားမာတက်ခဲ့တဲ့ ခြေထောက်တွေအတွက်ကျင့်သားရနေတဲ့ မျက်လုံးတွေကဘယ်တော့မှမကန်းဘူး ။ဖိနှိပ်မှုထဲမှာမြှောက်ခဲ့ရလွန်းလို့ပြုတ် ...
အဆိပ်သင့် သြဂုတ် – မောင်မော်ကွန်း
.ယမ်းပုံမီးကျသောကပျို့နင့်ဆို့နစ်မေ့မျော စိတ်မောစေခဲ့တာ … … ။ မီးလျှံ လောင်မြိုက်သောင်းတိုက်ကူးစက်စူးအက်ရှကြမ်း ရင်နွမ်းစေခဲ့တာ … … ။လေပြင်းမုန်တိုင်းပိုင်းဖြတ်ချိုးချွေပွင့်ကြွေသောသော လွင့်မျောစေခဲ့တာ … … ။ ဒီရေဒီလှိုင်းဆင်ရိုင်းမုန်ယိုကမ်းကို ...
သမိုင်းဝင်ပန်းချီကား – ငြိမ်းသွေး
.အပြုံးလေး တပွင့်ပွင့်နိုင်ဖို့တောင်အပြေးအလွှားလှုပ်ရှားအခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ဘဝထဲမှာခင်ဗျားပါမယ်………(ပါချင်မှလည်းပါမယ်)ကျွန်တော်ပါတယ်…အင်း……အကုန်လုံးပါတယ်ဆိုပါစို့လူတွေပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအမျိုးမျိုးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဆို ...
အနီ​ရောင်​ ရဲရဲ​တောက်​​ – ယံဇငြိဏ်း
.ရှစ်​ဆယ့်​ရှစ်​မှာ သ​န္ဓေယူရှစ်​ဆယ့်​ကိုးမှာ တိုးထွက်​လူသား ငါ့ကို ​သွေးညှီနံ့​တွေနဲ့ မိတ်​ဆက်​။ငါ့ ​ခြေဖဝါး​အောက်​နှင်းဆီပန်း​တွေအစား​သွေးစ​သွေး​န​တွေ လန့်​ပျံစ​ကော်​ပီယံတ​​ကောင်​ရဲ့မနက်​ခင်း​တွေပင်​နယန်သွားလို တ​ထစ်​ခြင်း တ​နှစ်​ခြင်း လည် ...
လှေကားထစ် ၃ဝ – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.ချောက်ထဲ ကျဖို့လက်တလုံး အလိုမှာနိုင်ငံဟာ ရပ်နေတယ်ဒီနေ့ အထိ။ချောက်ဟာချောက် အတုကြီး။၁၉၈၈ တုန်းကပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆန်ဟာ၂၀၁၈ မျိုးဆက်အထိ လာမှန်နေတုန်းပဲ။အသက်၊ သွေး၊ ချွေးတွေအများကြီးနဲ့လှေကားထစ်(၃၀)ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်ပြည်သူတွေကိုအလင်းရောင်ပျပျလေး ...
နားထင်ကိုထောက်ထားတဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝ – မိုးသက်ငြိမ်ဦး
.ဘယ်သူမှ ထင်မထားတဲ့ငါကိုယ်တိုင်လဲ ထင်မထားတဲ့ နေ့ရက် အချိန်နာရီ နေရာမှာနားထင်ကို အေးစက်စက် သေနတ်ပြောင်းဝ လာ တေ့တယ်လျှပ်တပြက်အတွင်း ငါ့စိတ်တသန်းဟာ ဆန်းကြယ်စွာပြေးလွှားငါ့စိတ်ကုဋေဟာ တိတ်တိတ်နေ ထောင်တန် ငါ့စိတ်အမှောင်ဟာ ရှောင်ပြေးရန်လုံးလုံးမရှိ မိ ...
﻿သွေးချင်းစစ်﻿ပွဲ – ﻿ရွှေဘ( ငါန်းဇွန်﻿)
.နှစ်﻿﻿တွေရှည်﻿လာ﻿လေ﻿လေမိုင်း﻿မြေ﻿တွေနဲ့﻿ခြေချစရာ ကျဉ်း လာ﻿လေ﻿လေဘဲ။ရန်﻿သူဆိုပြီးပစ်﻿လိုက်﻿တဲ့ကျည်﻿ဆန်ကတ﻿မိသား﻿တွေ ရဲ့အသည်းကိုမှန်﻿တယ်﻿အ﻿မေ ကျတဲ့ မျက်﻿ရည်﻿က ဘယ်﻿သူ့အတွက်﻿ ဆိုတာအ﻿မေကိုယ်﻿တိုင်﻿ မခွဲခြားနိုင်﻿ဘူး ဆိုတဲ့ စစ်﻿ပြည်﻿တွင်းစစ်﻿ တဲ့လာ ...
ရှင်သန်ခွင့် – မောင်နောင်မွန်
.ပက်ကြားအက်နေတဲ့ လည်ချောင်းတလျှောက်ဆန်တက်လာတဲ့ အသံတွေထဲအသက်ရှူခွင့်တွေ ပိုးစုန်းကြူးလေးလို ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်။သည်းကြီးမည်းကြီးနဲ့ ငြိုးနေတဲ့ ကောင်းကင်ထွက်ခွာရာပြ ဝိဘတ်တခုနဲ့ယိုင်နဲ့နဲ့ စိတ်ဓာတ်တချို့ပျက်လုပျက်ခင် မျှော်လင့်ချက်များမျက်နှာလွဲခဲ ...
ပြန်ဆုံချင်သေးတယ် ရန်ကုန် – လွမ်းသိင်္ခ
.ရန်ကုန်ရေ… နင်လည်း ဒုက္ခတွေအစုံ ငါလည်း ဒုက္ခတွေအဖုံဖုံနဲ့ ...
လွတ်သွားတဲ့ ငါး – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
.ရနံ့ချိုချို တစ်ပွဲ မှာတယ်ဘဝခါးခါးတွေ လာချပေးတယ်။မကောင်းဘူးထင်လို့ ပစ်ချလိုက်တယ်သူတစ်ပါးအတွက် ကောက်ဖဲဖြစ်သွားတယ်။ကိုယ်မြင်တဲ့အတိုင်း ရွေ့လိုက်တာပဲသူမြင်တဲ့အတိုင်းလည်း လှနေပြန်တယ်။သမရိုးကျအတိုင်း ပွင့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်ဝတ်မှုံကူးအတတ်နဲ့ အပွင့်ဟာ အရောင် ...
နှစ်​များ – မင်း​ချောမြင့်​
.ရယ်​​နေလိုက်​ရတာဇာတ်​လမ်းထဲ အဆင်​​ပြေဖို့အသက်​လို မြတ်​နိုးမိသွားတာ အပြစ်​ပဲစိတ်​ရှိလက်​ရှိ ရူးကြည့်​​နေမိတယ်​ပြီး​တော့ ကြယ်​​တွေ ​ရေ​နေမိတာ သက်​​စေ့ပဲတရားကို ငါ မ​စောင့်​ချင်​​တော့ပါမြစ်​ရိုး​လေး​ကောသွားခဲ့တာ ​ရေ​တွေက ​ကျောက်​သားလို ငြိမ်​သွာ ...
ဒီအတိုင်း – မောင်ထိန်လင်း(မြို့သာ)
.နင်းဖိထားတဲ့ အညှောင့်လေးကမြေမြုပ်မိုင်း ဖြစ်နေခဲ့တယ်အတ္တတွေ တဖွားဖွားပေါက်ပွားနေသူနဲ့ဒေါသတွေ မြိုသိပ်သိုလှောင်နေသူတို့ဒီအတိုင်း ရပ်နေရုံပဲဒီအကွက် ဒီလိုတက်လာပြီး ကင်းဝင်မယ်ပေါ့ဒီဇာတ်ကို ဒီလို ညွှန်းဖွဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တယ်စာသားတွေ ရွတ်ပြနေရုံနဲ့ဘယ်ရွှံ့ ...
၈၈၈၈ ဝိညာဉ်​များသို့ – ငဇ
.ဘယ်​​မေ့​လေလိမ့်​မလဲ ...မ​မေ့ဘူးဘယ်​​တော့မှ ​မေ့မှာမဟုတ်​ဘူး။​သွေး​တိုင်း ​သွေးတိုင်းအသက်​တိုင်း အသက်​တိုင်း​ယုံကြည်​ခြင်း​အပေါ်အသက်​ကို တင်​​သွေးခဲ့ကြ။လက်​သီးဆုပ်​ထဲမှာနာကျည်းခြင်းကို ဋ္ဌာပနာထားခဲ့ကြတက်​​ခေါက်​သံ မီးအားမြှင့်​။​​သေန​တ်ေ ...
၈၈၈၈ နှစ် ၃ဝ ပြည့် – မောင်ကြူးရင့်
.လရောင်စီးပုံကပါရမီရှင်မြို့မငြိမ်းရဲ့အချစ်သီချင်းတပုဒ်လိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ကောင်းကင်တခုလုံးကမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကြယ်ပွင့်တွေအားလုံးမြို့တွေ ရွာတွေ လမ်းတွေပေါ်မှာအလံတွေကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ဝင်းထိန်လင်းလက်လို့သြဂုတ်လ ရှစ်ရက်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်သုံးဆယ်တုန်းကသေန ...
စွဲမိစွဲရာနေ့စွဲများ – မောင်ငြိမ်းအောင်(အင်္ဂပူ)
.ငါတို့ ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသားကျချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကာလတွေပေါ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ နာကျင်မှုများများမျိုသိပ်မှု အတော်အသင့်ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်နဲ့လက်ထိုးအန်ခဲ့ရတဲ့ နှစ်ကာလတွေပေါ့အမှောင်ရောင်သမ်းတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲငါတို့ပွင့်ဝေခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာအငွေ့ပ ...
ကိုကိုအောင်(ရုက္ခ) – မိုးတွေရွာခဲ့တဲ့ မနက်ခင်းလေး
.သူငယ်ချင်း သိန်းကျော်စိုး ကျည်ဆန်တချက်ထိပြီးခွေခနဲ ကတ္တရာလမ်းမပေါ် လဲကျသွားသည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာ သွေးတွေ စိုရွှဲ လို့သွားသည်။ ကျွန်တော် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အဖြစ်ကို မြင်နေရသည်။ ကျွန်တော် သူ့ကို သွား ဆွဲလို့ မရ။ ကျည်ဆန်တွေက ကျွန်တော့် ဘေးက ဖြတ်သ ...
ဆင်​ခြင်​တုံတရား ​ချောင်​ပိတ်​ဖမ်းမှုများ – ကမ်လူဝေး
.သိမှုနဲ့ ဆင်​ခြင်​တုံတရားမှာအရာရာဟာ အံဝင်​ ဂွင်​ကျမဖြစ်​လှဘူးအံဝင်​ဂွင်​ကျ မဖြစ်​လှတဲ့ အဖြစ်​​တွေကလူတကာလက်​ခံ​နေ​သော အဖြစ်​များ။တဏှာရာဂ လိုဘပြည့်​သွားလို့ကမ္ဘာ​လောကကြီးကို ပိုင်​ပြီထင်​​နေတဲ့ လူမိုက်​ဟာစားပွဲထိပ်​မှာ ​နေရာရ​နေတယ်​။က​မောက်​ကမ က​ပေ ...
စိတ်ပျက်ဖွယ် ဒီတနင်္ဂနွေနေ့က – နေရိုင်း
.အဲ့လောက်မလိုပေမဲ့ ကိုင်းဖျားကိုင်းနားက လာရိုက်ခတ်ခုချိန်ဆို စစ်မျက်နှာတွေဖွင့်နေလောက်ပြီကဏ္ဍတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ အကြောင်းအရာကပြီးပြည့်စုံလောက်တဲ့ အဖြေ ပြီးပြည့်စုံလောက်တဲ့ ရလဒ်ပြီးပြည့်စုံလောက်တဲ့လက္ခဏာ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ခက်နေတာက လောကပါလတရားက ဘယ်ဆီမှာလဲလူသ ...
ဖုန်းမောင် – ကြင်နာစွာ ထွေးပိုက်ခြင်း (ဘာသာပြန်ကဗျာ)
.အရေပြားပေါ်မှာ လက်ဗွေရာ မကျန်နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ နှုတ်ခမ်းရာ မရှိ။ပြီးတော့ ခံစားခဲ့ အရာအားလုံးအမြင်အာရုံများနဲ့ ရင်ဖိုလှိုက်မောမူတုန်လှုပ်ခြင်းတွေ ဖန်တီးခဲ့ပြီ။မဟုတ်ဘူးဒါက ဆူညံနေတဲ့ နှလုံးခုန်သံတွေ။အတွေးနဲ့အတူ အတွေးများခြာခြာလည်နေ။စကားလုံးအပေါ်မှာစကားလုံ ...
အဆင်မပြေလို့ အိမ်မပြန်ဖြစ်သေးတဲ့ တိမ်တွေ – ထက်လူအောင်
.( ၃ )အဝေးပြေးကားဂိတ်မှာဝယ်မရတော့တဲ့ အိမ်ပြန်လက်မှတ်တစောင်မီးလောင်သွားတဲ့ အိမ်မက်တခြမ်းမှာ အမေ့ အိမ်လိပ်စာလည်း ပါသွားဘဏ်ငွေလွှဲကောင်တာကို တလတခါ ပုံမှန်သွားချင်တယ်ဒီအကြောင်းက အိမ်မက်ထဲ ထည့်မက်နေရတဲ့ တခုတည်းသောအရာ“မြို့ ပြအနာ” တဲ့တကိုယ်လုံးမှာ ဝဲ ...
ဘဝကပေးတဲ့ အတွေး – ကာတွန်းKzzh
မို​နေးသစ်​ – ငါး (၅)
အပိုင်း(၅)*******မျက်​နှာသစ်​လိုက်​​တော့မျက်​နှာ​ပေါ်က အ​ကြေးခွံ​တွေကွာကျလာတစ်​​နေ့လုံး တလက်​လက်​​တောက်​​နေတဲ့အ​ကြေးခွံ​တွေ​ကြောင့်​ပဲအသက်​ရှုကြပ်​လာ။​လောင်​စာကို မီးထည့်​တဆိတ်​ကို တစ်​အိတ်​ခြံစည်းရိုးခွစား​နေတဲ့ ငါး​တွေမျက်​မမြင်​ ငါး​တွေကနားေ ...
နရီမင်း – ငါ့မြို့(၈)
(၈)ငါ အဖေရိုက်တာ ခံရတဲ့နေ့တွေအမေကြိမ်းမောင်းတာ ခံရတဲ့နေ့တွေမှာဆိုစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ချောင်းကမ်းနံဘေးမှာ တစ်ညနေလုံး ထိုင်ပြီးချောင်းထဲမှာ သွားနေတဲ့လှေ၊ သမ္ဗန်၊ မော်တော်ဘုတ်နဲ့ ဖောင်တွေတာဘေးမှာ ဆိုက်ထားတဲ့ရောင်စုံသင်္ဘောငယ်တွေကို ငေးကြည့်နေခဲ့ဖူးတယ်။အခုတော ...
အချစ်​​ဟောင်း – ကမ်လူဝေး
.သူ့ရဲ့​တောက်​ပတဲ့ အ​ရောင်​အဝါနဲ့သစ္စာမဲ့မှုကို ​တွေ့​နေရတယ်​ငါက​တော့ တကယ်​ချစ်​ခဲ့ပါရဲ့သူက​တော့ မသိနိုင်​ခဲ့ငါထမ်းတင်​တဲ့ ပခုံးကဒဏ်​ရာထက်​ရင်​ထဲက ပိုနာကျင်​ခဲ့​ဒေါက်​ဖိနပ်​နဲ့ ဖြတ်​​လျောက်​သွားတဲ့​ခြေလှမ်းများအဆုံးအစမရှိ ပျက်​စီးခြင်းဆီ ဦးတည်​ ...
ပြောရဲပြောကြည့် – ကာတွန်းKzzh
“ ကိုရဲလွင် ” – မောင်ရင်ဆု
.ထာဝရပြည်သူ့ ဘက်တော်သားလူထုကိုသူပြောတဲ့စကားကဟေး ... ဘီလူးစည်း လူ့စည်း ရှိတယ်ဟေး ... ဘီလူးစည်း လူ့စည်း ရှိတယ်ဟေး ... ဘီလူးစည်း လူ့စည်း ရှိတယ်ပြီးတော့သူလမ်းဖြတ်ကူးတယ်ဝါရည်ဥ ညအလှတွေဆီသူမျက်နှာမူလို့သဇင်ပန်း မွှေးရနံ့တွေ သင်းပျံ့ပါစေမောင်ရင်ဆု10 JULY ...
“ လုံ ” – မောင်ရဲနွေ(ပလိပ်)
.ရင်ခုန်ပါရစေ...။စဉ်ယုံပါရစေ ...။ပင် လုံပါရစေ..။ ။မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်)၁၁.၇.၁၈ ...
ပိုးဟပ်တကောင်ရဲ့အကြောင်း – နေရိုင်း
.အနှစ် မရှိခဲ့ပြန်ဘူးခက်လိုက်တာက အဆုံးမရှိလည်း ဖြစ်ပျက်နေတာကိုထုံးစံအတိုင်းခေတ်ကြီးက အရည်မရ အဖတ်မရတွေများဆန်ရင်း နာနာဖွပ်တဲ့ ခါးနာခဲ့ပေါင်းလည်း များပြီ။ကန်ရေပြင်ကို အလွတ်သဘောနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေရုံနဲ့သံသရာက တကွေ့တပါတ် မြစ်ပွားနာလိုပုပ်နေတဲ့ငါးကြောင့ ...
ဇူလိုင်မျက်ရည် – ဧညိမ်းဝေ
.ရွာမယ့်ရွာတော့လည်း တပြည်လုံး တင်းအပြည့်ပါပဲကျပ်မပြည့်တဲ့ သေနတ်က မောင်းပြန် ပါစင့်တေ့က ငယ်ထိပ်တိုင်းကို တက်မှန်တယ်ပစ်ချက်အလွဲ ဟန်ချက်အမှန်နဲ့တပြိုင်တည်း ယိုင်လဲကျခဲ့တာပဲတိုင်းပြည်ကတော့ သွေးပွက်ပွက်အန်သွားတယ်။မိုးရွာထဲက မီးတောက်ခုထိ တောက်လျှောက် ...
သူတော်ချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ – ကာတွန်းKzzh
ပီတိဖြာလွင် စာပေခရီး မှတ်မှတ်ထင်ထင် – မြနှောင်းညို
.၇ ရက်၊ ၇ လ၊ ၂၀၁၈နေ့လည်၂ နာရီမှ ၄ နာရီကျရင် ကျမရဲ့ဖခင် ဦးတင်ဝင်းညိုရဲ့ “ လှေခွက်ချည်းကျန် ဆန်ခဲ့ပါသည် ” သမိုင်းဖြတ်သန်းခြင်း အထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ကို မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိမှာမို့ ...ပြင်ဦးလွင်လို့ တမင်တကာသတိထားခေါ်ဝေါ်နေဖြစ်တာ အခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှပါ။ ကျွန်မတ ...
နေ့သစ်တေး – ချောဘသစ်
.အလင်းကို ပိုးလာတဲ့ ခရုငယ်တောင်စဉ်အထပ်ထပ်အပေါ် တရွေ့ရွေ့…။ညထဲကို နံနက်စိမ့်ဝင်လာပြီအဓမ္မထဲကို ဓမ္မပျော်ဝင်လာပြီ။”ငြိမ်းချမ်းပါစေ ကမ္ဘာမြေ “ကြေးစည်ကလေး ထုကဗျာအမျှဝေသံ ကြားကြပါစေ။ချောဘသစ် ...
ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင့် – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
.ငြိမ်းချမ်းရေးထက်ဝမ်းရေးခက်တဲ့အခါ•••ပြောကြတယ်”အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ” တဲ့ဒါပေမယ့် သူမကသူမအလုပ်ကို ဂုဏ်ရှိတယ်လို့မထင်ဘူး။စစ်မက်ပြည်ထဲရေးထက်မိသားစုအရေးကခက်တဲ့အခါ•••လှနိုင်သမျှ လှအောင်သန့်နိုင်သမျှ သန့်အောင်အဝတ် အစား အနေအထိုင်ကအစပြုပြု ပြင်ပြင် ခြယ ...
​တော်​လှန်​​ရေးရဲ​ဘော်​ – ကမ်​လူ​ဝေး
.လင်းလက်​ခွင့်​ရမယ်​အထင်​နဲ့ကြယ်​တပွင့်​ဖြစ်​ချင်​ခဲ့။လှိုင်းထန်​တဲ့​ကောင်းကင်​မှာကြယ်​ပွင့်​​တွေဟာ ​ကြွေ။ကိုယ်​ပိုင်​အလင်းမဲ့တပါးသူရဲ့အလင်းနဲ့​ရောင်​ပြန်​လင်းတဲ့ လမင်း​ကောင်းကင်​မှာထင်းထင်းကြီး ​နေရာယူလို့။​လောကကိုအလင်းမျှဖို့ကြယ်​တပ ...
စောင့်ပြီးရင်း စောင့်နေဦး – ဖုန်းမောင်
. (ဘာသာပြန်ကဗျာ) စောင့်နေဦး စောင့်နေဦး ခဏတော့ စောင့်နေဦး။မင်း ဘယ်နေရာကိုပဲ သွား သွားမင်း ခဏတော့ စောင့်ရမှာမနက်ခင်း နေရောင်ခြည်အတွက် စောင့်ရတယ်ဘတ်စ်ကားလာတာ စောင့်ရတယ်ရထားလာတာ စောင့်ရတယ်။စာသင်ကျောင်းက ပြန်လာတဲ့ ကလေးငယ်ကို စောင့်ရတယ်မနက်စောစောမှာန...
ရင်းခဲ့သူတို့အား … နင်း၍ -ကာတွန်းKzzh
၈၈ ကောင်းဘွိုင် – စိုးနောင်(မုံရွာ)
.ကျောင်းသားဆိုတာအစိုးရကို.နွားလိုကျောင်းမယ့် နွားကျာင်းသား။စစ်အာဏာရှင် နွားသိုးကြီးတွေနဖားကြိုးပြတ်ပြီး လွတ်သွားတော့ဦးချိုသေနတ်နဲ့ မြင်မြင်သမျှလိုက်ခွေ့တော့တာပဲ။ရုပ်ရှင်ထဲကလိုသေနတ်မပစ်တတ်ပေမယ့်ကျည်ဆန်တွေ မိုးလိုရွာနေတဲ့လမ်းတွေပေါ်.နှလုံးသားကို ထီ ...
သံသယ – မင်းချောမြင့်
.သတ်​ပုံ မှား​နေတဲ့ ပုံကြည့်​လိုက်​​တော့ ဘယ်​သူမှန်းလည်း မသိဘူးလုပ်​ကြံသူဟာ ​ခြေသံ မ လုံ​ ဘူး​မျှော်​လင့်​တာက သူမဖြစ်​ရင်​ ပြီး​ရော ပဲ။မင်း​ချောမြင့်​ ...
ပါလေရာကြီး – ရန်နည်
.အပွေးမြင် အပင်သိသလိုအသွေးမြင်ကတည်းက အသွင်သိပါရဲ့။အစွန်းအထင်းများတဲ့သူဟာထင်ပေါ်ချင်စိတ် များပါဘိသနဲ့အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်လို့။တွေ့သမျှလူကို ပလူးရင်းချိုလိုက် ချဉ်လိုက်နဲ့ အဆီအငေါ်မတည့်လိုက်ပုံကဖွာလန်တကြဲ ရွဲ့စောင်းလို့။ခေတ်ကြီးကလည်း ဂနာမြ ...
တပတ်ရစ်နေ့တွေ – ဧညိမ်းဝေ
.တတ်နိုင်နေတဲ့ လှေခါးထစ်နောက်အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ငါလိုက်ခဲ့တယ်ခေတ်အတွက် စပါးနှံလေး တခက်ဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူတွေအတွက် ဝတ်ရည်လေး တစက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆန္ဒကို ထုံကူးဖို့ဘယ်လိုချဉ်းကပ် ချင်ခြင်းတပ်ရပါ့မလဲ။ဖောတ်လို့သာ ပေါက်တယ်ရွာမရောက်တဲ့လမ်းကငါတို့အတွက် ဗလာမပါတဲ့ ကံစ ...
နား​တွေရှိတဲ့နံရံ – မိုးသက်ငြိမ်ဦး
.ဘယ်​သူမှမသိ​အောင်​​ပြောလိုက်​တဲ့စကားသံ​တွေ စိုက်​၀င်​​နေတဲ့နံရံအ​မှောင်​​တွေကြီးစိုးလာရင်​​တောင်​ပြိုးပြိုးပြက်​ပြက်​ လင်းလက်​လာသလိုအသံများအလွမ်း​တွေကို သပ်​ချလိုက်​​တော့ငါ့နာဖျားမှုဟာ မြင်​မ​ကောင်းဘူးကိုယ်​စီသိထားရခြင်း​တွေ သိုသိပ်​​နေရခြင ...
လွမ်းမိတဲ့မိုး – ထက်ဝေး
.စိမ်းမြသစ်ရွက်တို့ မျက်ရည်တွဲလွဲမိုးရာသီအလွမ်းနဲ့ ပိတ်မှောင်နေတဲ့ဟိုး … အဝေးခေါ်သံက လွင့်လာသလိုအလိုဖက်ရွက်ပေါ်ကရေစက်ကလေးလူးကာလိမ့်ကာနဲ့ငါ့စိတ်က အတိတ်ကိုမျှော်ခေါ်လို့အလွမ်းဟာ မိုးစက်တွေကြားဟင်းလင်းပြင်ကိုဖြတ်ကာတိမ်တွေဆီက သူ့ရုပ်လွှာထံအပြေးနှင်လို့ခ ...
ဗိုလ်ချုပ် – မောင်ရဲနွေ(ပလိပ်)
.ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့တယ်..။တိုင်းရင်းသားတွေ ပေါင်းစုပြည်ထောင်စု တည်ခဲ့တယ်..။ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်အရုပ် လုပ်ဖို့ မဟုတ်…။အလုပ်တွေ လုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဂုဏ်ပုဒ်မသေးနုပ်စေချင်..။ ။မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်)၄.၇.၁၈ ...
ငါဟာ ရေလျှံမြစ်တစင်းဖြစ်တယ် – မောင်အောင်ပွင့်
.ငါဟာ ရေလျှံမြစ်တစင်းဖြစ်တယ်ဆိုမှပဲ၊ ဆိုမှပဲမြစ်အောက် နေနေတဲ့ နိုင်ငံတော်အဝှမ်းကအဖြစ်အပျက် ခံစားမှုအစုစု ချင့်တွက်ကြပေရော့။မောင်အောင်ပွင့်၆၊ ၇၊ ၂ဝ၁၀ ...
နေလုံးကိုဆွတ်ယူသူ ကမ္ဘာဦးနဲ့ လမင်းကိုငေးမောသူ လူသား – နရီမြိတ်
.ငါတို့ရဲ့နုနယ်ပျိုမြစ်ခြင်းတွေကို မပေးဘဲအိုမင်းခြင်းတွေကို မရနိုင်ငါတို့နေထွက်ခြင်းတွေကို မပေးဘဲနေဝင်ခြင်းကို မရရှိနိုင်ငါတို့မျိုးစေ့များကို မပေးဘဲကြီးမားသောသစ်ပင်ကြီးနဲ့ ဧမြသောအရိပ်တွေကိုမရနိုင်ငါတို့ဆုံးမသင်ကြားခြင်းကို မပေးဘဲထူးချွန်ထက် ...
၇ ရက် ဇူလိုင် ခုနှစ်သက်တိုင် – အုပ်မိုး
.တံတားဖြူဟာပျောက်သွားတဲ့သူ့အမည်ကိုအခုထိရှာလို့မဆုံးဘူး။လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သခိုက်မှောင်မိုက်မယ်မထင်ခဲ့သောတံခါးဇာခန်းဆီးတွေကဘဲဇာချဲ့ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား..။သူတို့အငုတ်စိတ်က ခုတ်ထစ်လိုက်ကြပြီ။ဒီခေါင်းလောင်းကို ထိုးလိုက်ပြီးထဲကကျောင်းသားဘဝဆိုတာသပ်တွေအကြောင်း အ ...
သူတို့က ချမ်းသာသွားကြတာပါ – ကာတွန်းKzzh
ဖွင့်ဖတ်ချင်နေတဲ့ ဇူလိုင် – လင်းနွေးအိမ်
.ဇူလိုင်မှာကျဆုံးလေပြီးသောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို အလေးပြုသလိုကျဆုံးလေပြီးသောကျောင်းသားတွေကိုလည်း အလေးပြုတယ်။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေက သူ့ကျွန်ဘဝကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သလိုဇူလိုင်မှာကျဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေက ကိုယ့်ကျွန်ဘဝကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တ ...
ဇူလိုင် – သင်းရည်လွင်
.ကျည်ဆံအခွံ တခုမှာလည်းသမိုင်းရှိတယ် ……မေ့ချင်သူက မေ့ပြီးမမေ့ချင်သူက ခုထိ လွမ်းကောင်းတုန်းဇူလိုင်ခင်ဗျားဟာသံချေးတက်နေပေမယ့်ထက်ရှနေတဲ့ဓားလို ရင်ဘတ်ထဲ ခုတ်ထစ်ပိုင်းဖြတ်ကောင်းနေတုန်းဇူလိုင် ……………… ။သင်းရည်လွင်2014းjulး19 ...
ကြိုးတိုက်ထဲက မှတ်တမ်းမှတ်ရာ – မောင်လွမ်းဏီ
.အမည် ကြိုးတိုက်တိုက် အမှတ် . ၂တိုက်ပွဲနှစ်များ တေးသားသက်ဝင်ရှင်သန်လှုပ်ရှားဆဲပေတကား ။ခါးလည်တံခါးစည်းခြားပိုင်နက် ခြမ်းတဘက်၌နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဖြတ်ပြတ်ပြတ်သားသား ရှားရှားပါးပါးကြိုးသမားတို့ အံကြိတ်ရာ.။ကြိုးစာရင်းဝင် ကိုညွန့်တင် ...
၇ အိပ်​မက်​သစ်​ – ဖိုး​ရွှေညီမှိုင်း
.အဲဒီ့​နေ့က ​ကြွေခဲ့ရတဲ့ကြယ်​ပြိုခဲ့ရတဲ့အိမ်​။​ခြွေချခဲ့ဖြိုချခဲ့ပြီးအားပါးတရ အသံနက်​ကြီးနဲ့"ဓား ဓားချင်း၊ လှံ လှံချင်း"တဲ့အပ်​တ​​ချောင်း ကိုင်​မထားသူ​တွေကိုစိမ်​​ခေါ်ရဲပုံများ။" ... မ​မေ့ကြနဲ့"တဲ့နံရံမှာ ​သွေးနဲ့​ရေးခဲ့ပြိုသွားတဲ့အိမ်​ထဲက​ကြေ ...
ဟီရိုရှီးမား အသက်ရှူသံ – ရာမညမင်းငြိမ်းချမ်း
.မလျှော့တဲ့ ဇွဲနဲ့ရေဆန်ကို ဆန်တက်ဆော်လမွန်ငါးများတာဝန်ခံမှုအပြည့်မျိုးဆက်အပေါ်တာဝန်ကျေခဲ့။လူမဆန်မျိုးချစ်စိတ်ဟီရိုရှီးမားမြို့ပေါ်ပျံ့ဝဲမနေကူးစက်ရောဂါလိုလူမျိုးကြီးဝါဒ ရောနှောခြင်းမရှိကြေကွဲဖွယ်အနိဌာရုံကြားနိပွန်ဟာနောက်မျိုးဆက်အတွက်ပေးဆပ်ဖို့သပ်သပ ...
ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး – လုံမငြိမ်းချမ်း
.မ​မေ့ဘူးဘယ်​​တော့မှ မ​မေ့ဘူးဒီလို​နေ့မျိုးက ဘယ်​​တော့မှ ​မေ့မရဘူးကုန်​ခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်​ မနက်​ ၁၀နာရီ​ကျော်​​ကျော်​​လောက်​ အ​ဖေသာယာဝတီထောင်​က အိမ်​ပြန်​​ရောက်​ခဲ့တာ​ပေါ့...လွှတ်​တာက ၆ ရက်​​နေ့ အချိန်​မမီလိုက်​​တော့ ရန်​ကုန်​မှာ တ​ညအိပ်​ ပုသိမ်​ကို ...
၇ ဇူလိုင်ရဲ့ တံခါးဖွင့်ချိန် – မွန်ရည်ကျော်
.တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တိုင်းထောင်းခနဲထတဲ့ သွေးညှီနံ့ဟာငါ့တကိုယ်လုံး လိမ်းကျံလို့။အဓိပတိလမ်းက ဝိညာဉ်တောအုပ်ကလေးမှာဒေါင်းအလံတွေ လွှမ်းခဲ့ရစိတ်ခွန်အားတွေခူးဆွတ်တယောက်လက်မှတယောက်ဆီသို့မျိုးဆက်အဆင့်ဆင့်သမိုင်းအဆင့်ဆင့်။အတိတ်နဲ့ အရိပ်ရဲ့ခြောက်လှန့်မှုမ ...
7 ဇူလိုင် – မောင်ကြူးရင့်
.မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနက်ရောင်နေ့BIack Day ဟာ7 ဇူလိုင်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုသတ္တိရှိရှိ ရဲရဲရင့်ရင့်ပွဲဦးထွက်အသေခံစိန်ခေါ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာ7 ဇူလိုင်ပါပဲစစ်အာဏာရှင်ကကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားသမ္မဂ္ဂ အဆောက်အဦကိုဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ရက်ရက်စက်စက်သ ...
ဇူလိုင်နီ – စိုးနေလင်း
.ခုလိုမစဲ မိုးဖွဲ စွေရွာဆဲနီစွေးရဲရဲ စိန်ပန်းတို့ရှိုက်နမ်းအဓိပတိလမ်း ကံ့ကော်တန်းနဲ့သစ်ပုတ်ပင်အိုကောင်းကင်ကို အပွင့်လင်းဆုံး ရှင်းဖွင့်လိုသူများပျားပန်းခတ်…မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ရတနာမွန်သမိုင်းတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့သူများ ခြေရာချခဲ့ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦ ...
ဆဲ​ဗင်းဂျူလိုင်​ – မိုးဦး​ဆွေညိန်း
.အ​သေအ​ကြေ တွန်းဖွင့်​ခဲ့တယ်​​သေနတ်​​ပြောင်း​တွေနဲ့ ပိတ်​ထားတဲ့ တိုင်းပြည်​​ကို၊​ကျောနဲ့ရင်​ ထုတ်​ချင်းခတ်​ဒီလိုကြီးလား ဇာတ်​လမ်း​တွေ အခန်းဆက်​ရင်​နင့်​စရာ တဖွဖွ တသသနဲ့ ကျည်​ဆံ​တွေကြား ကျသွားတဲ့ တိုင်းပြည်​ကို၊ဒီမိုက​ရေစီ တိုင်းပြည် မဖြစ်​ ...
ကြယ်တွေကြွေဖို့ ဆုတောင်းမယ် – ခင်မင်းဇော်
.ကြယ်ကြွေတိုင်း မင်းနဲ့ဆုံဖို့ ဆုတောင်းတယ်။ဒီလိုနဲ့ကောင်းကင်ကြီးကကြယ်တွေကြွေဖို့ ကိုယ်ကအချိန်တိုင်း မျှော်လင့်စောင့်စားနေမိခဲ့တယ်။လမိုက်ညတွေ လပြည့်ညတွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလို့ကိုယ့်အတွက် ကြွေမယ့်ကြယ်တွေကပျောက်ဆုံးနေဆဲပေါ့။ဟောဒီမိုးကောင်းကင်ကို ...
မိုးနံ့တိမ် – မောင်လွမ်းဏီ
.သင်းပျံ့သယောင်နောင်တရနေတဲ့ လွင့်လွှာအနောက်တောင် မိုးပြာညိုရိပ်နဲ့ ရင်ထိတ်ရပြန်ခဲ့။လေကျတယ် ငါ့မောင်အိမ်ခေါင်မိုးထက် သွပ်ပြားတွေကဘဝကို စုတ်ဖြဲသလိုပေါ့ပုပ္ပါးလေလာတိုင်းတိမ်နီရိုင်းတွေ ပြိုဆင်းလာတိုင်းဧရာဝတီလှိုင်းတွေက ကဆုန်စိုင်းတယ်။မန်ကျည်းပင်အိုကြ ...
အိမ်တွင်းမီး – စည်သူသိင်္ဃ
.မပြေလည်မှုဟာအိမ်အတွင်းမှာ လှိုက်လောင်တဲ့မီးပဲအတောင်ပေါက်ပြီး ထပျံကြတဲ့ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေခံနိုင်ရည်ဟူသမျှကဒီအဝန်းအဝိုင်းထဲရောက်မှအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကျိုးပေါက်တတ်တဲ့အမျိုးလားစကားလုံးတွေဟာဗုံးတွေလို ထမြည်လို့နာကျင်မှုတံခါးဝကထွက်ကျလာတဲ့မျက်ရည်စများအဖူ ...
ဘုရားပြီးတော့ ငြမ်း – ကာတွန်းKzzh
ဆရာမ – ​ရွှေကြယ်​မိုး
.(၁) ဆရာမ မဆုံးမလို့ မာနေတဲ့ခေါင်းတွေထဲမှာ၂၀၁၄ ခုနှစ်​ဟာ အခုထိ ချမ်းနေတုန်းပဲဇီဇဝါရောင် နေရောင်ခြည်တွေအောက်မှာခုတော့လည်း ဆရာမက သက္ကရာဇ်တခုကျနော်က သက္ကရာဇ်တခုနှစ်​ပေါင်းများစွာ ကျန်ခဲ့ပြီဆရာမ သဘောကျတဲ့ လက်ဖျံပေါ်က တက်တူးနဲ့ဆရာမ မကြိုက်တဲ့ ကာလများမှာ ...
.ကောင်းကင်ဒိုးယိုပေါက်တွေက ထွက်ကျလာတဲ့ မိုးတွေကအိမ်ခေါင်မိုးကတဆင့် ငါတို့မိသားစုထဲ စိမ့်ဝင်လာတယ်။ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် နှလုံးတုန်လို့ အိပ်မပျော်တဲ့ သက်ထားတညလုံးပဲ ဒီချောင်းကလေးရဲ့လှိုင်းကြက်ခွပ်သံအကြောင်းက မညီညွတ်သွေးလေဓာတ်ပြားဟောင်းတချပ်ဓာတ်ကြီးလေ ...
.( ၂ )ပက်လက်လှန်ထားတုန်း ကောင်းကင်ကိုမမြင်ခဲ့ရဘဲမှောက်ခုံဖြစ်တော့မှ ငရဲဘုံဟာ တန်းတန်းမတ်မတ်နာစရာလည်းများ လွမ်းစရာလည်းများကြွေကျလာတဲ့အသီးမှာတောင် ပိုးပေါက်ရာဗရပွနဲ့ ။တီကောင်တွေ အထွေးလိုက်ကို ဆားပက်လိုက်သလိုအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားရတဲ့ လူ့ ဖြစ်တည်မှုေ ...
သင်းကွဲ ရထား – သင်းရည်လွင်
.တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘူတာရုံလေးမှာ အချက်မပြတော့ဘူးထိုင်ခုံမဲ့ ခရီးသည်တွေကရောက်လာမယ့်နေ့ကိုလည်း တွေးမနေတော့ဘူးသူ ပွင့်ချင်သလိုပွင့်တဲ့ လေထီးလိုသူ ခုန်ချလိုက်တယ်အစွန်းမလွတ်တဲ့ သစ်ကိုင်းကိုကြိုသိနေမှတော့ ဒီလမ်းကို အပြင်းမောင်းနေမိမှာပဲနောက်ကြည့် မှန်ထဲန...
နရီမင်း – ငါ့မြို့(၇)
.အပိုင်း(၇)တကယ်တော့ ဈေးကြီးဟာမြစ်လို့ အမည်တွင်တဲ့ချောင်းဘေးမှာ ရှိတာ။ပြဌာန်းစာအုပ်တွေထဲမှာ မြစ်လို့ ရေးထားပေမယ့်တစ်မြို့လုံးက ချောင်းလို့ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ ငါတို့ ငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီချောင်းဟာ မိုးအားကိုးနဲ့ ဒေါသကြီးကြီးပြတတ်တယ်။စိုးရိမ်ရေမှတ်တွေ ဘာတေ ...
အိပ်မက် အံဖတ် – ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
.“ထာဝရ ရန်​သူမရှိဘူးထာဝရ မိတ်​​ဆွေမရှိဘူးထာဝရ အကျိုးစီးပွားပဲရှိတယ်​”ဒါ …သူတို့ရဲ့ အဘိဓမ္မာ။ရန်​သူ ချစ်​သူ ဘဝတခုမှာ ဒီနှစ်​ခုက ရှိကိုရှိတယ်​ ဒါငါတို့ရဲ့ အဘိဓမ္မာ။ငါ မယုံတဲ့ဟာ မျိုမချချင်​လို့ ငါ ရွံစရာ ဒီအိပ်​မက်​ကြီးကိုလည်​​ချောင်းထဲ လက်​ထိုးအံခ ...
မိုနေးသစ် – ငါး (၄)
.အပိုင်း(၄)*******ကိုယ် မရေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းအတွက် အကယ်ဒမီမှန်းထားတဲ့ ငါး တွေ။ကြက်လိုပဲဇလုတ်ထဲအစာ ဖွက်ထားချင်တဲ့ ငါး တွေ။ဥတု အပြောင်းရေ အပြောင်းမှာအရောင် မပြောင်းချင်တဲ့ ငါး တွေ။ကိုယ်သောက် ပြီးရေ နှောက်ပစ်ချင်တဲ့ ငါး တွေ။စားချင်စိတ်က အကြီးကြီးဘယ် ...
ထန်းပင်ကြီးက မြင့်လိုက်တာ – မောင်မော်ကွန်း
.• လေးတန်းအောင်ရင်တော်ပါပြီ သေစာရှင်စာလေး ဖတ်တတ် အလှူ ဖိတ်စာလေး ဖတ်တတ် မတ်တတ်စာလေး ရှာတတ်ရင် ကိုယ့်ရွာထဲတင် ကြုံ ရာကျပမ်း တဝမ်းတခါးမခက်ပါဘူး … တဲ့ ။• ရှစ်တန်းလေးလောက်အောင်ထားရင် အချေးအငှားထူတဲ့ဘဝမှာ တွက်တတ်ချက်တတ် သူများညစ်ပတ်တာ မခံရပြ ...
ခင်ဗျားကဗျာတော့ မလွယ်တော့ – မင်းမျိုးအောင်စံ
.ခင်ဗျားကဗျာဟာခင်ဗျားရဲ့ပုံမှန်သင်ကြားမှုစနစ်ကိုလက်မခံတော့ဘူး ဆိုရင်ခင်ဗျားကဗျာဟာခင်ဗျားကိုအကြောင်းမဲ့ ရယ်ပြနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကဗျာဟာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုမကြောက်တတ်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားကဗျာဟာနာကျင်မှုဝေဒနာကို မသိ/မခံစားတတ်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားက ...
ရွာက အမေညိုသို့ – သူ့ထက်ကဲ(မန်း)
.မြို့ဟာ တောဖြစ်တောဟာ မြို့စနစ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလွင့်ပါးမုဆိုးဟာ သားကောင်ကိုအမြဲချောင်းလို့မိုးတွေကလည်း တအုန်းအုန်းပြေးပုန်းစရာ ရှာတော့မသေကောင်း မပျောက်ကောင်းနဲ့ကောင်းကင်အပေါ်ခေါင်းမော့ကြည့်ရတာလည်းမမောနိုင်တော့ဘူး အမေ……။ဈေးသွား ဈေးပြန်ဘေးရန်ကို သ ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိုင်းရပ်တွေ – အလင်းသစ်(ရွှေဆည်မြေ)
.မျက်စိက ဝါးဝါးနေတော့ငြိမ်းချမ်းရေးက သိပ်မမြင်ရဘူးလေက ပါးပါးတိုက်နေတော့ငြိမ်းချမ်းရေးက ပစ်မှတ်မထိဘူးစကားက ထစ်ထစ်နေတော့ငြိမ်းချမ်းရေးက နားသိပ်မလည်ဘူးစစ်က စပိများနေတော့ငြိမ်းချမ်းရေးက ဘရိတ်မခံနိုင်ဘူးစာအုပ်က မည်းညစ်နေတော့ငြိမ်းချမ်းရေးက မင်ရာ မထင် ...
လေခံနေတဲ့ နေ့လည် – ငြိမ်းသွေး
.ဘွဲ့ဓာတ်ပုံကြီး အိမ်ဦးခန်းချိတ်ထားရုံနဲ့ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်လာမှာမှ မဟုတ်တာတခါကဆယ်တန်းအောင်ဖူးပြီး ဘွဲ့ရဖူးတယ်ဆိုတာ သတိရနေရုံနဲ့နောင်လာနောက်သားတွေ ဂုဏ်ယူဖို့မလုံလောက်ကြမှာစိုးလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာလားဒီလိုပါဘဲအမှတ်တရဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ကြွားဝါမှုတွေကိ ...
ဂိုးဖမ်းသမားများ – လေပြည်ချမ်းချမ်း
.ရွှီ ….ဒိုင်လူကြီး၏ ခရာမှုတ်သံနှင့်အတူ ပွဲက စတင်လာခဲ့ပါပြီ ။ပွဲ မစခင်က မာန်တကြွကြွ ခြေတဆဆ၊ ပွဲစဉ်အတွင်းမှာ တွန်းလိုက်ထိုးလိုက် ၊ ပွဲစဉ်အလယ်မှာ မောပန်းပေမယ့် ခြေကုန်သုတ်ရ ၊ ပွဲအပြီးမှာတော့ အနိုင်-အရှုံးဆိုတာ ကွဲပြားလာသည်မှာ ဘောလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်တစ်ရပ်ပ ...
စိတ်မော လူမော ညများ – နေရိုင်း
.ညတိုင်း ညတိုင်းအဲဒီဒုက္ခအိုးထဲ ငါဖွင့်ဖွင့်ကြည့်နေတာဒုက္ခကောင်တွေက တွားသွားလို့ခရီးပေါက်ခဲ့ရက်ပေါင်းထောင်ချီ နေပြီပေါ့။ကောင်းကင်ကကြယ်တွေ တစင်းပြီးတစင်းကြွေကျနေတာတောင် ကြယ်တွေက ယုတ်လျော့မသွားဘူးခရီးအဆက်ဆက်က ကြယ်တွေဟာ ရဲရင့်တယ်။ဟိုမှာ မိုးတွေရွာေ ...
အပိုဆု – ဧညိမ်းဝေ
.တွေ့သမျှ ကောက်ပြီးအနာကို စုဗူးထဲ ခေါက်ထည့်လိုက်ရတယ်။လက်ငုတ်လက်ရင်းမို့ငါတို့ ဘယ်လို အမြစ်ဖြုတ်လို့ရမှာလဲအဆင်မပြေရင် ထုတ်သုံးဖို့ဒါတွေက လက်ပစ်ဗုံးပဲ ဆိုပါတော့။နည်းတဲ့သူ မျှယူရမှာပဲတယောက်ကို တယောက်ကြည့်ပြီးဘယ်သူမှ မလောက်ငှစေရဘူးအနာကို အညီအမျှခွဲလ ...
ကြယ်တွေဆီ – ထွန်းကို
.တောမီးတွေ လောင်နေတဲ့ပုံကကမ္ဘာမီးလောင်နေသလိုပဲလားအပြောင်းအလဲကတော့ညနေညနေဆို ကလေးတွေ ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တယ်လူနဲ့စက်ရုပ် စစ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကဆက်ရန်ဆက်ရန် ရှိပါသေးတယ်မြောက်ကျွန်းက ဂြိုဟ်သားတွေ လာရင်တော့ ကြိုဆိုရမှာပဲဓူဝံကြယ်က ပြန်စိုက်ကြည့်နေတာဘယ ...
စစ်​ – ငဇ
.စစ်​ကို လှုပ်​နှိုးလိုက်​တဲ့ ငါ့​မေးခွန်း​တွေမှာ​ခြေတဖက်​ပြတ်​သွားတဲ့ က​လေးငယ်​​လေး​တွေရဲ့အနာဂတ်​ကျိုးပဲ့သံ​တွေ မြည်​တယ်​။စစ်​ကို လှုပ်​နှိုးလိုက်​တဲ့ ငါ့​မေးခွန်း​​တွေမှာ​ပျော်​​အောင်​ မအိပ်​ရတာ ကြာပြီဖြစ်​တဲ့ကျီးလန့်​စာစား စစ်​​ဘေး​ရှောင်​​အ​မေ ...
ကောင်းကင်ကြီး ငါ့အပေါ်ပြိုတယ် – အောင်သာငယ်
.ဘယ်လိုပဲ လင်းလက်နေတဲ့နေ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်ပဲ မဲနက်နေတဲ့ ညဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကာလတွေနဲ့ပဲ ထုဆစ်ရတာ မဟုတ်လား…နေ့၊ လ၊ နှစ်တွေရဲ့အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ အမှား အယွင်းနဲ့မကြိုဆို မလိုလားအပ်တဲ့ ကျိန်စာအလိုမတူပဲ တွန့်လိမ်သွားရရှာတဲ့ နာရီတလုံးပေါ်မှာရက်ရက်စက်စက် ကျရောက် ...
နေဇော်နိုင် – ဆူရှီဘွိုင်းဆိပ်ခံကလေး
.သူ့စကားလုံး ကိုယ့်စကားလုံးတွေကိုရေနည်းနည်း ထပ်ရောကြတယ်တချို့ခေါင်းတိုင်တွေက မီးခိုးတလူလူနဲ့ပေါ့အစုန်အဆန်ခုတ်မောင်းသွားသမျှအကြည့်တွေနဲ့ မြိုချကြအာဂန္တုခေါင်းစဉ်တွေအပေါ်မဟော်သဓာလုပ်ကြဖန်ခွက်ထဲမှာ မုန်တိုင်းထန်ရင်ဆူနာမီအန္တရာယ်ကို သတိပေးကြဆည်းဆာက ကဗျ ...
တရာဖိုးသုံးပုဒ် – နှင်းခါးမိုး
.နေမင်းကြီးတောင် တနေ့တခါ ကျဆုံးရသေးတာပဲ အရေးကြီးတာက မနက်ဖြန်မှာ မနက်ခင်းတခုနဲ့ ပြန်လာနိုင်ဖို့ပဲမဟုတ်လား။ရန်ကုန်မှာနေနေပေမယ့် ရန်ကုန်မှာမနေသလိုပဲ နေနေတယ်လူ့ပြည်မှာနေနေပေမယ့် လူ့ပြည်မှာမနေသလိုပဲ နေနေတယ်။ ကံကိုမယုံပါဘူး၊ ဆူးပုံကိုတော့ ခဏခဏနင်းဘူးတ ...
ဇွန်လမှာ ပွင့်တဲ့ပန်း – မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်)
.ဇွန် အလွန် လှတယ်…။ဇွန်မှာပွင့်တဲ့ ပန်းလန်း လွန်းတယ်…။ဇွန်မှာ ပွင့်တဲ့ ပန်းဆန်း လွန်းတယ် …။ဇွန်မှာပွင့်တဲ့ ပန်းမွှေး လွန်းတယ် …။ဇွန်မှာ ပွင့်တဲ့ ပန်းမြ လွန်းတယ်…။လန်းဆန်းမွှေးမြလှပတဲ့ ပန်းလေးတပွင့်ပါ..။အဲဒီပန်းလန်းဖို့ဆန်းဖို့မွှေးဖို့ မြဖို့ လိုအ ...
ဇွန် – မင်းချောမြင့်
.မုတ်သုန်ကို ဖွင့်ချလိုက်သလို စိတ်ရင်းက ကောင်းပုံနဲ့ရွာရန် သေချာနေတဲ့ ရွာရန် ရာနှုံးများတာချည်းပါပဲမိုးလေဝသဟာ ဗေဒင်မယုံဘူးငါတို့ မမေးမြန်းဖြစ်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေချည်းပဲမိုးမှာ ရေဖြစ်သွားတယ်ရေက ငတ်မွတ်သွားတာ ချည်းပဲရေချိုပါရွာလွန်းတဲ့ အရပ်မှာပဲ မရှိပြ ...
မိုးသားများ – တိုးနှောင်မိုး
.ကိုယ်ပူနေတဲ့ ကောင်းကင်မှာ ရာသီကအညိုရွှံ့ထဲက ငါးလေးက သေပြီး ပုပ်ပွတောသူမ ဆွတ်လာတဲ့ ရေမွှေးက ပဲရစ်က လာတာဟမ်းဖုန်းက နုတ်ဆဲလ်ဗင်းဆိုင်ကယ်က တရုတ်အကုန်လုံး အတုဖြစ်နေတော့မနေ့ တနေ့ ကမှ ပင်လယ်ရေကဖြစ်လာတဲ့ ဆားပို ငန်ပြနေလည်းလေသလပ် ငိုရတာပဲမို့ ဘဏ်စာရင်းနဲ ...
အိပ်မက်ဆိုးနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ကလေးတယောက် – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
.အဲဒီနေ့ကကစားစရာအသစ်တွေရောက်လာမယ်လို့မေမေ ဆရာမကပြောတယ်။တကယ်ရောက်လာတော့သေနက်တွေနဲ့ဗုံးတွေကစားမလား နားမလား မဟုတ်ပဲဗုံးကျဲမှာလား တိုက်မလားအဲဒီနေ့ကစလို့မေမေ ဆရာမနဲ့ ဝေးခဲ့ရတယ်။အဲဒီနေ့ကပန်းကန်ပြားပျံကြီးကျလာမယ်လို့အမေကပြောတယ်။တကယ်ကျလာတော့ဗုံးသံတွေ သေ ...
ငါတို့ ဖြစ်ရပုံ – လင်းသက်ငြိမ်
.တိုက်ပွဲမှာ လိုက်ပွဲတွေရှိသလားသေနိုင်တဲ့ အသက်တွေ တန်းစီလို့လွယ်လွယ်တည်ဆောက်မရတဲ့ဘဝတွေလွယ်လွယ်ကျကွဲရမီးကိုသတ်တော့ မီးသတ်သမားဝက်ကိုသတ်တော့ ဝက်သတ်သမားဖြစ်ပုံကစစ်သတ်သမား တယောက်မှမရှိဘူးစစ်သားတွေပဲ နှစ်ဖက်စလုံးထပ်ထပ် ထွက်လာတာပဲ။လင်းသက်ငြိမ် ...
အိပ်မက်ရထား – ဝင်းဌေးဦး
.အချိန်ကာလရဲ့ ရွေ့လျားနှုန်းတွေလိုဖမ်းဆုပ်မမီအောင်ပဲဆိုပါတော့ ။လေလိုသွားနေတယ်ရေလိုစီးနေတယ်ဒါပေမယ့် မြေသားလိုတည်ငြိမ်ခွင့်အတွက်ကျောက်ချရပ်နားစရာ ကမ်းခြေတခုအာမခံမရှိဘူး ။မျဉ်းပြိုင်တခုရဲ့ အားပြိုင်မှုအတွက်မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ သင်္ချာရဲ့နိယာမတချို့ကိုမကျေနပ ...
ရွယ်လူးကို ရွတ်မပြရသေးတဲ့ ငါ့ကဗျာ – ရာမိုးဇင်
.မသေတဲ့ကမ္ဘာမှာဒီကဗျာကို နားသောတဆင်ပါ ရွယ်လူးဒေဝဒတ်လမ်းစဉ်နဲ့ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင် ပင်လယ်မှာငါတို့ လူညွန့်မတုံးခဲ့ဘူး ရွယ်လူးခွေးအူတာ ထမကြည့်မိခဲ့လို့အရိုးကိုက် အရင်းကိုက် ခွေးရူးရဲ့ ကိုက်ခဲတာခံခဲ့ရပြီ ရွယ်လူးရူးနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာရူးမနေခဲ့သူဟာ ...
ကျော်သူ၊ မင်းကျော်ခိုင် – ခရမ်းပြာရဲ့  နှစ်ငါးဆယ်ခြေလှမ်းများ
.ပြည်သူတွေချစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ် ကျဆုံးတဲ့ ၄၇ မှာလူ့လောကထဲရောက်ခဲ့တဲ့…..သူ။ပြည့်သူ့အာဏာကို ဦးနေဝင်းသိမ်းလိုက်တဲ့ ၆၂အစဉ်အလာကြီးတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုဖြိုခွင်းလိုက်တဲ့ ၆၂ မှာ…အားနည်းတဲ့ ကျောင်းသားပြည်သူတွေဘက်ကရပ်တည်ဖို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားအဖြစ် ၁၅ နှစ်သားန ...
ဒုက္ခဂီတ – အံ့ဘွယ်ဟိန်း
.အသက်ကြီးလာတဲ့ ပြက္ခဒိန်ဟာ ငါ ပဲမြွေတကောင်လိုလည်းအရေခွံ သုံးဆယ့်ခြောက်ခါလဲခဲ့ပြီဘဝက ရပ်လို့ မရဘူးနံပါတ်ပြောင်းစီးလို့ မရတဲ့ ဖိနပ်တွေလမ်းမပေါ် ပြတ်ကျန်ခဲ့ကြတယ်လူပီသခြင်း ဒုက္ခတရားကိုတက်တူးတခုလိုငါ့အရေပြားပေါ် ငါကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့မ်ိမမြဲခြင်းတရား ဆ ...
အဆင်မပြေလို့ အိမ်မပြန်ဖြစ်သေးတဲ့ တိမ်တွေ (၁) – ထက်လူအောင်
.( ၁ )အပူပေးခံထားရတဲ့ သံချောင်းဟာ ဓားကောင်းတလက်ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်နေအပေါက်မဖောက်ရသေးတဲ့ နားရွက်မှာ ဘယ် နားကပ် နားတောင်းမှ ပန်လို့မရငိုနေတဲ့ မျက်နှာဟာ လက်သီးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်အထိုးခံရတယ် ခေတ်ကို ထက်ပိုင်းချိုးချင်တဲ့ စိတ်တွေမနေ့က ရွာတဲ့မိုးမှာ ထမင်း ...
ပိုကောင်းတဲ့ အနာဂတ်တွေ ဘယ်နှကြိမ် – နေထက်နိုင်
.အဲဒီခရီးကို စနိုင်ဖို့အတိတ်က အဆုံးသတ်တွေကိုပြန်ကြည့်ရတယ်။ပိတောက်ဘယ်နှကြိမ်ပွင့်ပြီးပြီ။ဆိုရှယ်လစ် ဘယ်နှကြိမ်ဒီမိုကရေစီ ဘယ်နှကြိမ်တိုင်းပြည်ကြီးချောက်ထဲကျခဲ့တာ ဘယ်နှကြိမ်ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဘယ်နှကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့ ...
ဆာရီမလေးရဲ့ပန်းခြံ – ညီဇော်ချစ်
.တော်လှန်ရေးအတွက်လက်သီးဆုပ်ရဲဖို့ လိုသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်ချင်းဆက်ရဲဖို့လိုတာပေါ့လက်သဲကြားအပ်စိုက်ရဲမှသူရဲကောင်းဝါဒလို့ငါတို့တွေးခေါ်နေချိန်ပါလက်စတိုင်းအိမ်ရှင်မတယောက်ဟာအစ္စရေးအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ဗုံးဆံတွေကိုပန်းတခင်းဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်ပြီန ...
အစက်များ – ဖုန်းမောင်”DROPS” by Malinda Seneviratne
.(ဘာသာပြန်ကဗျာ)အစက်များ စီးဆင်းကြတယ်အစက်များဟာ ခေတ္တယာယီ နေထိုင်အစက်များဟာ လွင့်စင် ထွက်ခွာသွားကြအစက်များဟာ တစ်စက်ချင်း ကျတယ်ပြီးတော့ ပျောက်ကွယ် ပျက်စီးသွားကြတယ်။အစက်များဟာ ထွက်ခွာသွားတဲ့ အမှတ်အသား ခြေရာတွေ ချန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အစက်များဟာ အကြွင်းအကျ ...
အစစ်​ – ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
.အသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်​​မြေ​တွေ ပြန်​မ​ပေးဘူးဥပ​ဒေနဲ့ အညီ။အဖမ်းခံထားရတဲ့ သတင်း​ထောက်​​တွေ ပြန်​မလွှတ်​ဘူးဥပ​ဒေနဲ့ အညီ။လူသတ်​သမား​တွေ လွတ်​​နေတယ်​ဖမ်းမမိဘူးဥပ​ဒေနဲ့ အညီ။"ငြိမ်းချမ်း​ရေး ကဗျာ" ရွတ်​ခွင့်​မရှိဘူးဥပ​ဒေနဲ့ အညီ။တရားခွင်​မှာ အမှန်​က ...
ဟိုတုန်းကအဖြစ်ရော အခုလစ်မစ်ရော – သူ့ထက်ကဲ(မန်း)
.ဟို တလောကအသည်းနှစ်ခြမ်းဗြန်းဗြန်းကွဲသွားတဲ့ ပေါက်ကျော်မလိုမင်းကို ကြည့်လို့ကို မရဘူး……။နေပါဦး ရင်ဘတ်ထဲကသံစဉ်တွေ မြွက်ဆိုလိုက်တာဟာစိန်ခေါ် အကွက်ချတာမဟုတ်ဘူးကာရန်တွေ ပျံသန်းနေတာတိမ်ပေါ်တက်တာ မဟုတ်ဘူးအတိုင်အဖောက်ညီခဲ့တာကျည်ဆန်ထည့်နေတာမဟုတ်ဘူးအက္ခရာတေ ...